တခုသော ၁၉ ဂျူလိုင် မှာ ကျွန်မ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ပွဲအကြောင်း ~ Nge Naing
တခုသော ၁၉ ဂျူလိုင် မှာ ကျွန်မ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ပွဲအကြောင်း
Friday, July 08, 2011 Nge Naing 72 comments
"အာဇာနည်နေ့မှာတော့ သိပ်မမိုက်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့လက်ချက်နဲ့ ရှောသွားတဲ့ မဆလ ကောင်တွေကို သူရဲကောင်းကြီးတွေအဖြစ် အာဇာနည်တွေနဲ့အတူတူ အလေးပြုခံနေရရင် မတန်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်က7July ကိုပဲ ရွေးချင်ခဲ့တာ" လို့ တပ်မှူး တယောက်က ပြောလိုက်တာကို အိမ်ခန်းထဲမှာ အိပ်နေရင်းနဲ့ အိပ်မပျော်သေးလို့ ကျွန်မ ကောင်းကောင်း ကြားနေရတယ်။ အဲဒီအချန်က ရန်သူစခန်းတခုကို သွားသိမ်းဖို့ ချီလာတဲ့ ဒီစစ်ကြောင်းမှာ ရဲမေ သုံးယောက်ပါပြီး ညဘက်ရောက်တော့ အိမ်တအိမ်မှာ တည်းနေစဉ် ကျွန်မတို့ ရဲမေသုံးယောက်ကို အိမ်ခန်းထဲမှာ ပေးအိပ်ပြီး ကျန်တဲ့တပ်မှူးတွေနဲ့ အိမ်ရှင်တွေက အပြင်မှာ အိပ်ကြပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးက အင်ယုတယာက်ရယ် ကျွန်မနဲ့အတူ တခြားတယောက်က ဆေးမှူးတွေ ဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ တပ်မှူးတွေ တိုင်ပင်နေကြပါတယ်။ အပြင်က တပ်မှူးတွေက စခန်းကို ဘယ်လိုဝင်သိမ်းပြီး ပြည်သူ့စစ်တွေ အကုန်အရှင်ဖမ်းပြီး စစ်တပ်ကို အသေပစ်သတ်မယ်လို့ ပြောရင်း ခုနက စကားကို နောက်ဆက်တွဲ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ " အဲဒီဘက်ကို သွားရင် စမ်းချောင်းအထပ်ထပ် ဖြတ်ရမှာဆိုတော့ တောင်ကျချောင်းက ရေပြည့်နေနိုင်လို့ ခရီးဖြောင့်ဖြောင့် ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး" လို့ အိပ်ပျော်နေပြီလို့ ကျွန်မ ထင်နေတဲ့ အင်ယုက အပြင်က လူတွေကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ မိုးရွာနေလို့ အင်ယုပြောတာကို အပြင်က တပ်မှူးတွေကတော့ မကြားရဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မက "အင်ယု မအိပ်သေးဘူးလား ဟိုမှာ နင့်ထက်ပိုလမ်းကျွမ်းတဲ့ ဦး တင်အောင် တယောက်လုံး ရှိနေတာပဲ သူတို့သိမှာပေါ့" လို့ ပြောပြီး ကျွန်မက အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ဖို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်ယုကတော့ " မငယ်ကလည်း ဦးတင်အောင်က တပ်မှူးမှ မဟုတ်တာ အခုဦးဆောင်ပြီး သွားမည့် တပ်ခွဲမှူးရော တပ်ရင်းမှူးပါ နှစ်ယောက်စလုံးက ဒီဂွင်မှာ တခါမှ မလှုပ်ရှားဖူးတော့ ဒါတွေကို ထည့်တွက်မှာ မဟုတ်ဘူး" လို့ ပြောပြီး စပ်စုချင်နေသေးတယ်။ ကျွန်မက "သူတို့က တပ်မှူးတွေပါ သူတို့ ပိုသိပါတယ်၊ ကဲပါ7July ပဲဖြစ်ဖြစ် 19 July ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိဘူး။ မနက်ဖြန်စောစော ထပြီး ခရီးဆက်ရမယ် ပြီးတော့ မနက်ဖန်ညကစပြီး တောထဲမှာပဲ မိုးကာခြုံ၊ ပုခက်ဆွဲပြီး အိပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ အခုငါတို့အလုပ်က ဒီည အိမ်ပေါ်မှာ တည်းခွင့်ရတုန်း ကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် အိပ်ရအောင်" လို့ ကျွန်မ အင်ယုကို ပြောလိုက်ပေမဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့မပျော်ခဲ့ဘူး။
၉၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်ပထမပတ် ဒီလို ၁၆ ရက်နေ့က အကြောင်းအရာတွေကို မနေ့တနေ့ကလို မှတ်မိနေပြီး အဲဒီတုန်းက ရန်သူ့စခန်းတခုကို သွားသိမ်းခဲ့တာကို ရုပ်ရှင်တကားကို ကြည့်ရသလို မျက်စိထဲမှာ ကောင်းကောင်း မြင်ယောင်ပြီး မှတ်မိနေပါတယ်။ ခုနက ပြောနေတာကို ပြန်ဆက်ရရင် စစ်တပ်စခန်းရှိတဲ့ ရွာထဲကို ဘယ်လမ်းက ၀င်မယ် စခန်းကို ဘယ်လိုသိမ်းမယ် ဘယ်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဘယ်လို အရှင်ဝင်ဖမ်းမယ် ဆိုတာတွေကို အကုန်ကြားနေရပြီး အဲဒီရွာမှာ အရင်နှစ်က တနှစ်နီးပါး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာလို နေလာခဲ့တော့ အင်ယုကလည်း အားမရလို့ မဟုတ်သေးပါဘူး ဒီလမ်းထက် ဟိုလမ်းက ပိုကောင်းတယ် ဒီနည်းထက် ဟိုနည်းက ပိုကောင်းတယ်နဲ့ စပ်စုပြီး သွားပြောချင်လို့ အိပ်ရာကနေ ငေါက်ကနဲ ထထ ထိုင်နေတာကို "အင်ယုအိပ်တော့ နင့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး" လို့ ကျွန်မမှာ ဆွဲထားရတယ်။ အင်ယုမှာ အင်မတန် ကောင်းတဲ့မှတ်ဥာဏ်တခုက ခရီးတခုကို တခါသွားပြီးရင် အဲဒီလမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ်ဆိုတာ အကုန်မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်တယ်။ အဒီစစ်တပ်ထိုင်ထားတဲ့ ရွာမှာ ၈၉ ကနေ ၉၁ အထိ ကျွန်မတို့ တပ်တွေ စိုးမိုးထားပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာလို တပ်ထိုင်ပြီး သွားနေခဲ့ရာကနေ ၉၁ နှစ်ကုန်ခန့်မှာမှ ကျွန်မတို့တပ်တွေ လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ ရွာဖြစ်တယ်။ ၉၁ ခုနှစ်သင်္ကြန်နဲ့ ၉၁ ခုနှစ် ဒီရွာနားက စက်တော်ရာဘုရားပွဲ ကျင်းပတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီရွာကိုကျွန်မတို့တပ်တွေ စိုးမိုးထားတဲ့အချိန် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့တပ်တွေပဲ လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစစ်ကြောင်းမှာအခု ဦးဆောင်မည့် ကျွန်မတို့ တပ်မှူးနှစ်ယောက်ကတော့ ဒီနယ်မြေကို ရောက်ဖူးသူတွေတွေ မဟုတ်ကြဘဲ တပ်ခွဲမှူးအသစ် ပြောင်းလို့ အခုမှ ဒီနယ်မြေမှာ လှုပ်ရှားဖို့ တပ်ရင်းက ဆင်းလာသူတွေ ဖြစ်လို့ အင်ယုက စိုးရိမ်ပြီး သူသိထားတာကို ၀င်ပြောဖို့ ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်တယ်။ (ဓါတ်ပုံက ဆက်သွယ်ရေးတပ်က ရဲမေတွေပုံ ဖြစ်ပြီး မိယုက စက်လတ်ကျည်တောင့်တွေ သိုင်းထားတဲ့ တယောက်ဖြစ်တယ်။)
ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ စည်းရုံးရေး စစ်ကြောင်းတွေမှာပဲ ကျွန်မတို့ ရဲမေတွေ လိုက်ရတာ များပြီး ဒီလို စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပါတဲ့ စစ်ကြောင်းထွက်ရင် အရင်တပ်မှုး အတော်များများကတော့ မိန်းကလေးပါရင် ရန်သူက သဲသဲမဲမဲ လိုက်မှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ကို နောက်တန်း ခွဲရုံးမှာပဲ ချန်ထားခဲ့တာ များလို့ အရင်တပ်ခွဲမှူးတယောက်ဆို ကျွန်မနဲ့ မကြာခဏ စကားအချေအတင် ဖြစ်ဖူးတာကို နောက်ပိုင်းအထိ သတိရတိုင်း အဲဒီတပ်ခွဲမှူးနဲ့ ကျွန်မနဲ့ စကားများပုံကို ရဲဘော်တွေက ရီစရာအဖြစ် ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ်။
အခု လာတဲ့ တပ်ခွဲမှူးအသစ်ဖြစ်သူ ရဲဘော် မင်းဇော်သူကတော့ လူငယ်ဆိုတော့ပိုပြီးလည်း တက်ကြွတယ်၊ ကျွန်မတို့နဲ့လည်း အသက်အရွယ်က မတိမ်းမယိမ်း သင်တန်းလည်း တပတ်စဉ်တည်းဆင်း ဆိုတော့ လူချင်းလည်း ပိုရင်းနှီးတယ်။ ဒီခရီးကို မထွက်လာခင် အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြတော့ သူက "ရှေ့တန်း ထွက်မှတော့ ရန်သူလိုက်တာ ဘာဆန်းလို့လဲ။ သူလိုက်ရင် ကိုယ်လည်း ပြန်လိုက်တာပေါ့။ ဒါကိုကြောက် နေရင် ရှေ့တန်းကိုတောင် လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါက ရန်သူလိုက်လေ ပိုကြိုက်လေပဲ၊ ငါ့စစ်ကြောင်းမှာ နင်တို့ကို ငါတို့ ယောက်ျားလေးတွေလို သွားနိုင်လာနိုင်နေသရွေ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ နောက်တန်းခွဲရုံးမှာ ချန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး " လို့ တပ်ခွဲမှူးက ပြောလို့ ကျွန်မက "နင့်ရဲ့ သတ္တိနဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မခွဲခြားတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ ငါတို့က ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တန်းတူ သွားလို့ နိုင်မနိုင်ဆိုတာ သင်တန်းအတူတူ တက်လာလို့ နင်သိပြီးသားပဲ၊ တို့အဖွဲ့အစည်းမှာ နင့်လိုတပ်မှူးတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်၊ " လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
နောက်နေ့မှာတော့ ညက ပြောထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့ အစောကြီး ခရီးမဆက်ဖြစ်ဘဲ ညနေအေးဘက်ရောက်မှ ရွာကထွက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေ့က မနက်ပိုင်း မသွားဖြစ်တော့ တနေကုန် နားနားနေနေပဲ ရွာသားတွေကို ဆေးလိုက်ကုတယ်။ ရဲဘော်တွေက မြို့ကတက်လာတဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့ ရွာသားတွေကို အဖွဲ့အစည်းကထုတ်တဲ့ ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်တွေ၊ တော်လှန်ရေး သီချင်းခွေတွေဝေတယ်။ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲအခွေ ထွက်ပြီး ရှေ့တန်းတွေကို စဖြန့်ချိန် သီချင်းခွေတွေကို အိမ်တိုင်းလိုလိုက အားပေးကြတော့ " ပျံသာ ပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ မုန်တိုင်းမိုးထက်ဆီ" နဲ့ အစချီတဲ့ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ဒေါင်းတမန်သီချင်းက ကျွန်မတို့ ရှိနေစဉ်တော့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ကြားနေရတယ်။ ကျွန်မတို့ထွက်ပြီး ရွာထဲကို စစ်တပ်ဝင်လာရင်တော့ ဒီအခွေတွေကို ဘယ်နားမှာသွားဝှက်မလဲ မသိဘူး။ ကျွန်မတို့ ညနေဘက် ခရီးထွက်တော့ ရွာသူကြီးနဲ့ ရွာသားတွေအမြင်မှာ ကျွန်မတို့က တောတွင်းကိုသွားတဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်အရပ် ချောင်းဖျားဘက်ကို ပြန်တက်တဲ့ပုံစံနဲ့ အထွက် ပြပြီး တကယ်တမ်း ကျွန်မတို့ သွားဖြစ်တာက အနောက်တောင်ဘက်ရှိ ကျွန်မတို့ သွားတိုက်မည့်ဘက်ခြမ်းကို တောင်ကြောတွေကနေ ပတ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တပ်မှူးတွေက သတင်းပေါက်ကြားမှာစိုးလို့ မနက်အစောကြီး ခရီးဆက်ထွက်ဖို့ ညက ကျေညာထားပြီးမှ အစီစဉ်ကို ညနေဘက်ကို တမင်ပဲ ရွှေ့လိုက်ပြီး မိုးကောင်းလို့ အစီစဉ်ဖျက်ပြီး တောတွင်း ပြန်သွားပြီထင်အောင် ဖန်တီးခဲ့တာလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
လမ်းခရီး အခြေအနေက မိုးရာသီလည်းဖြစ် မိုးများတဲ့နေ့တွေလည်း ဖြစ်နေတော့ ပွင့်လင်းရာသီလို တောင်ကြောတလျှောက်မှာ သစ်ခုတ်ဝါးခုတ် လာသူတွေကို မတွေ့ရ၊ တောင်ယာတွေမှာလည်း ဇူလိုင်လဆိုတော့ စူးထိုး မျိုးစေ့ချပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ တောင်ယာတဲတွေမှာ လူသူမရှိတော့တဲ့အချိန် ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပဲ လူတွေ့မှာစိုးလို့ နေ့ဘက်မှာ တောင်ကြောဘက်မှာ ပြန်နားပြီး လူသွားလူလာ နည်းတဲ့အချိန်နဲ့ ညဘက်ပဲ ရွာတွေနား ပြန်ကပ်ပြီး ခရီးဆက်လာခဲ့တော့ သတင်းပေါက်ကြားမှုအတွက် စိုးရိမ်စရာ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။။ မိုးသီးထန်စွာ ရွာနေတော့ ညဘက်မှာ ရွာဘေးနားက ကျွန်မတို့ ဖြတ်သွားတာကို မြင်တဲ့ခွေးတွေက ဟောင်ပေမဲ့ မိုးရွာနေလို့လား အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်က ရွာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျွန်မတို့ တပ်တွေ ဆုတ်ခွာလာပြီးနောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေသိပ်မဖြစ်တော့လို့လားတော့ မသိ ခွေးဟောင်သံကြောင့် ဘယ်သူမှ ထကြည့်ကြတာ မတွေ့ဘူး။ ထကြည့်လည်း ကျွန်မတို့ ၀တ်ထားတဲ့ ပြောက်ကျားယူနီဖေါင်းအရောင် စစ်အရောင်မိုးကာတွေက ညဘက်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာ မြင်တွေ့ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ခရီးထွက်တဲ့ ညမှာတော့ အိမ်ခြေသိပ်ကျဲကျဲ ရွာတရွာကို အရောက်မှာ ညကိုးနာရီခွဲ ဆယ်နာရီခန့် ရှိမယ်ထင်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ တောဘက်ကရွာတွေက စောစောအိပ်လေ့ရှိတော့ စာသင်ကျောင်းမှာ ကလေးတွေကို ဆရာတွေ စာခေါ်ပြတာကလွဲရင် တခြား အိမ်သားတွေ အကုန်လုံးအိပ်နေပါပြီ။ မိုးရွာထားတော့ ရွာဘေးလယ်ကွက်မှာ ရေတွေ ပြည့်နေလို့ ရွာပြင်က ဖြတ်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ မလွဲသာ မရှောင်သာ ရွာထဲကပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး လူမသိအောင် သတိထားဖြတ်ရတယ်။ အရိပ်ရှိရာ အကာအကွယ်ယူပြီး ပုန်းလိုက် ခြေကိုဖွဖွနင်းပြီး ဖြတ်ပြေးလိုက်နဲ့ လူမတွေ့အောင်၊ အသံမကြားအောင် အိမ်တွေအရှေ့ကနေ ရွာဦးကနေ ရွာစွန်အထိ ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ရွာစွန်က စာသင်ကျောင်းရှေ့ ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာတော့ ကလေးတွေက အများကြီးဆိုတော့ ကျောင်းရှေ့က သူတို့မတွေ့အောင် ဖြတ်ရတာ တော်တော်လေးကို သတိထားရပြီး ကျွန်မတို့အတွက် သဲထိတ်ရင်ဖို နိုင်လှပါတယ်။
ကျောင်းရှေ့မှာ ဘာအကာအကွယ်မှ မရှိဘဲ အလံတိုင်တတိုင်ပဲ ရှိတယ်။ ကျောင်းဒီဘက်ကနေ အလံတိုင်ကို ဖြတ်ပြီး ဆက်သွားရင် ကျောင်းရဲ့ဟိုဘက် အစွန်မှာ စမ်းချောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ကျောင်းရဲ့ဒီဘက်အစွန် ကနုးမို့မို့ ကျောက်ဆောင်နားကနေ ဟိုဘက် စမ်းချောင်းနားရှိ သစ်ပင်အရိပ်အောက် ရောက်အောင် အလံတိုင်ရှေ့ကို ဖြတ်ပြီး လူမမြင်အောင် ကုန်းကွ ကုန်းကွနဲ့ ဖြတ်ကူးရပါတယ်။ ကလေးတွေက အပြင်ဘက်ကျတဲ့ ခုံတန်းတွေမှာလည်း ရှိပြီး စာဖတ်နေတောာ့ ကျွန်မ ဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာ တယောက်ယောက် တွေ့သွားမှာစိုးလို့ ကျွန်မ အသက်တောင် ရဲရဲမရှူနိုင်ဘူး။ ကျွန်မ မဖြတ်ခင် တခြားသူတွေ ဖြတ်နေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖြတ်မည့် အလှည့်ကို စောင့်နေချိန်မှာတော့ စာဖတ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စစ်တပ်နဲ့ ကျွန်မတို့တွေ့လို့ ရုတ်တရက် မထင်မှတ်ဘဲ တိုက်ပွဲသာ ဖြစ်ရင်တော့ အခုစာဖတ်နေတဲ့ ကလေးတွေတော့ သေနတ်သံတွေ တဒိုင်းဒိုင်း တဂျိမ်းဂျိမ်းအောက်မှာ ကမ္ဘာပျက်မတတ် ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်ပြီး ကြောက်လန့်ကြမှာပဲလို့ ကျွန်မ တွေးနေမိတယ်။ တိုက်ပွဲ မဟုတ်သေးဘဲ အခုလိုကျွန်မတို့တွေ တယောက်ပြီးတယောက် ကုန်းကွကုန်းကွနဲ့ ကျောင်းရှေ့က ဖြတ်ပြေးနေကြတာကို မတော်တဆ ကလေး တယောက်ယေက် မြင်သွားပြီး လှမ်းအော်ရင်တောင် တော်တော်လေး ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ပြီး သွေးပျက်ထိန့်လန့်ကြမှာ သေချာတယ်လို့ တွေးပြီး ကလေးတွေ ကျွန်မတို့ကို မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မ ဆုတာင်းတာ သူတို့တွေ့ရင် သတင်းပေါက်ကြားပြီး ကျွန်မတို့ အစီစဉ်ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ဆိုတဲ့စိတ် လုံးဝမရှိခဲ့ဘဲ ကျွန်မတို့ကိုတွေ့ပြီး သူတို့လေးတွေ စာဖတ်နေတာတွေ စာဆွေးနွေးနေတာတွေ ကင်းစင်ပျောက်လွင့်သွားပြီး အသည်းပျက်မတတ် ကြောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်လို့ ဆုတောင်းတာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်မ ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်း ပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်။ ရွာတရွာလုံးကိုဖြတ်လာတာ ကျွန်မတို့ကို လူတယေက်မှ မတွေ့လိုက်ဘူး။
ကျွန်မက အင်ယုလို တခါတည်းသွားဖူးရုံလောက်နဲ့ လမ်းမမှတ်မိတတ်ပေမဲ့ ဒီရွာတွေက ကျွန်မတို့ အရင်နှစ်က ခေါက်တုန့်ခေက်ဖြန့် သွားလာလှုပ်ရှားနေကျ ရွာတွေဆိုတော့ ဘယ်ရောက်ပြီးရင် အရှေ့မှာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ အကုန်မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီညက အရှေ့တောအုပ်ကျော်ရင် မျှော့အင်မတန်ပေါတဲ့ မြေနှိမ့်နှိမ့်နဲ့ ရေအိုင်ရှိတဲ့ကွင်းပြင်တခုကို ဖြတ်ရတော့မယ် ဆိုတာသိနေတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ တပ်မှူးက စစ်ကြောင်းသွားစဉ် လူတန်းကို ပုံမပျက်စေနဲ့လို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောထားပြောထား ကျွန်မက ဒီနေရာ အပါအ၀င် မျှော့ရှိတဲ့ရေအိုင်တွေကိုဖြတ်ရတိုင်းမှာ တပ်မှူးစကား တခါမှ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ စစ်ကြောင်းမှာ ရဲမေသုံးယောက် ပါလာတာ အင်ယုနဲ့ တခြားတယောက်က ကျွန်မလောက် မျှော့မကြောက်ဘူး။ ကျွန်မကတော့ စစ်ကြောင်းအတိုင်း လျှောက်ရင် မျှော့တွယ်မှာစိုးလို့ ဒီလိုရေအိုင်တွေရောက်တိုင်း ရေဒူးခေါင်းကျော်နေလည်း သူများတွေလို ခြေတောက်ကို ရေထဲမှာ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ဘယ်တော့မှ မလျှောက်ဘဲ ယူနီဖေါင်းကို ပေါင်လယ်ကျော်အထိ အပေါ်ရောက်နိုင်သလောက် ရောက်အောင် လိပ်တင်ပြီး ဖိနပ်ကိုဆွဲကာ သူများလျှောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းဘေးဘက်ကနေ ခြေတောက်ကို ရေထဲမှာ ရှိတဲ့အချိန် နည်းသည်ထက် နည်းအောင်လျှောက်တဲ့အနေနဲ့ ခြေ ဖ၀ါးကို ရေမျက်နှာပြင်အပေါ်ကနေ ဖတ်ကနဲမြန်မြန်ချပြီး မြေကြီးနဲ့ထိတာနဲ့ ချက်ချင်း ပြန်ဆွဲတင်ကာ ခုန်ပြီး ပြေးလျှောက်တယ်။ ဟိုဘက်ရောက်မှ ယူနီဖေါင်းကို ပြန်ဖြေချ ဖိနပ်ပြန်စီးပြီး ဟန်မပျက်ဘဲ စစ်ကြောင်းအတိုင်း ပြန်သွားတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်မခြေတောက်ကို မျှော့လည်း ကပ်ချိန်မရလိုက်ဘူး ယူနီဖေါင်းလည်း မစိုတော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီညက စစ်ကြောင်းမှာတော့ အရင်လို ကိုယ့်တပ်က စိုးမိုးထားတဲ့ နယ်မြေမှာ အေးအေးဆေးဆေး သွားလာလှုပ်ရှားတုန်းကပုံစံ မဟုတ်တော့ ဒီလိုလုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ညဘက်မှောင်မဲမဲအချိန်မှာ စခန်းတခုကို သွားသိမ်းဖို့ သွားနေတဲ့ စစ်ကြောင်း ဖြစ်တော့ လူသိမှာစိုးလို့ တိတ်တဆိတ် သွားနေရတယ်။ မှောင်နေပေမဲ့ လူတွေ့မှာစိုးလို့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလည်း ထိုးလို့မရဘူး။ လူစုကွဲမှာ လူပျောက်မှာစိုးလို့ ရှေ့ကလူရဲ့ ခါးပတ် (သို့) Equipment ကို နောက်ကလူက တွဲထားရတယ်။ ဒီတခါ ကွင်းကို ဖြတ်ရာမှာ ယူနီဖေါင်းကိုတော့ နဂိုကတည်းက မိုးရွာနေလို့ စိုနေပြီမို့ မျှော့လာတွယ်ရင် ခြေတောက်ကိုမတွယ်မိဘဲ ယူနီဖေါင်းကိုပဲ တွယ်မိအောင် မလိပ်တင်ဘဲ ကျွန်မ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကွင်းကို ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ သူများကတော့ ဘယ်ဆီကို စိတ်ရောက်နေလဲမသိဘူး ကျွန်မကတော့ စခန်းသွားသိမ်းဖို့ သွားနေတယ်ဆိုတာကိုတောင် သတိမရနိုင်ဘူး။ ယူနီဖေါင်းကိုများ မျှော့တွယ်နေပြီလားမသိဘူးလို့ပဲ တွေးပြီး ရှေ့ကရဲဘော်ရဲ့ ခါးပတ်ကို မကိုင်ထားတဲ့ ကျန်တဲ့ လက်တဘက်နဲ့ ခြေတောက်နှစ်ဘက်ကို တလှည့်စီ ခဏခဏ စမ်းကြည့်နေတယ်။ မျှော့ဆီကိုပဲ အာရုံရောက်နေလို့ အရှေ့ကရဲဘော်က တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ တခုခု ပြောနေတာကို မကြားလိုက်ဘူး။ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေတာကို သတိထားမိမှ "ဘာပြောနေတာလဲ ဒီမှာငါ မျှော့တွယ်နေလားလို့ ဘောင်းဘီကို လိုက်စမ်းနေလို့ မကြားလိုက်ဘူး ပြန်ပြောပါ" လို့ လေသံနဲ့ပဲ ပြန်မေးလိုက်မှ "စကားဝှက်ပြောနေတာလေ" ဆိုလို့ " အော်ဟုတ်လား ဆောရီး" ဆိုပြီး စကားဝှက်ကို သေသေချာချာ ပြန်နားထောင်ပြီး နောက်ကလူတွေကို ဆက်ပြောရတယ်။
တိုက်ပွဲက လက်နက်ကြီးငယ် အသံတွေထက် ရေထဲမှာ လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ သွားနေတဲ့ မျှော့ကို ကျွန်မ ပိုကြောက်တာတော့ အမှန်ပဲ။ မျှော့မတွယ်ခင် လှုပ်စိလှုပ်စိကိုသာ ကြောက်ပေမဲ့ တွယ်ပြီဆိုရင်တော့ တခြား မျှော့ကြောက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလို ခြေတောက်ကို အနောက်ပစ်ကာ အသဲအသန် အော်ပြီး သူများ လာဖြုတ်ပေးတာကို စောင့်နေတာမျိုးတော့ ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ မျှော့တွယ်မှန်း သိတာနဲ့ ချက်ချင်း လက်ထဲကို တံတွေးထွေးထည့်ပြီး တံတွေးနဲ့ မျှော့ကို သုတ်ပြီး ဖြုတ်ဖို့တော့ တခါမှ လက်မနှေးသလို သူများကို မျှော့တွယ်တာ တွေ့ရင်လည်း "မျှော့ကို ဒီအတိုင်းမဖြုတ်နဲ့ တံတွေးဆွတ်ပြီးဖြုတ်ပါ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြုတ်လို့ရတယ်" လို့ လှမ်းသတိပေးပြီး ဆရာလုပ်တတ်ပါတယ်။ မျှော့တွယ်တာကို တံတွေးမပါဘဲ ဒီအတိုင်းဖြုတ်ရင် တော်တော်နဲ့ ဖြုတ်လို့မရဘဲ မျှော့ကြီးက ကိုက်ထားတဲ့နေရာကို မလွှတ်ပေးဘဲ ဆွဲထုတ်လေ ရှည်ထွက်လာလေ ဖြစ်လို့ ပိုပြီး ကြောက်စရာ အသည်းယားစရာ ဖြစ်စေတယ်။ တံတွေးနဲ့ ဆိုရင် သူများတွေမျှော့ဖြုတ်သလို ကိုက်ထားတဲ့ နေရာကို လက်သည်းနဲ့လည်း ခြစ်ထုတ်နေစရာမလိုဘူး။ တံတွေးနဲ့ ထိတာနဲ့ မျှော့ဟာ ချက်ချင်း ပျော့ဖတ်ခွေလိမ်သွားပြီး လုံးဝမတွယ်ထားနိုင်တော့ဘဲ အလုံးလိုက်ကို ပြုတ်ကျလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မျှော့ကြောက်လွန်းလို့ လေ့လာထားတဲ့ မျှော့ကိုနိုင်တဲ့နည်း တခုပါ။
လမ်းခရီးအကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် မိုးက ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးသီးထန်နေတော့ ခရီးက ထင်သလောက် မရောက်ခဲ့ဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကို မရောက်ခဲ့ဘဲ တယောက်တကြိုးစီ သယ်လာတဲ့ ဆန်ကြိုးထဲက ဆန်တွေကလည်း ကုန်သွားလို့ ဆန်ကြိုးကို ကျောပိုးအိတ်ထဲ ခေါက်ထည့်ထားရတယ်။ ရဲဘော်တွေထဲမှာ နေမကောင်းသူလည်း ရှိလာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာကို ရောက်အောင် ဒီနေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ ခရီးမဆက်ဘဲ တောင်ယာတခုအနီးမှာ ခဏနားလိုက်ရတယ်။ ကျန်တဲ့ တပ်စိတ် တပ်စုတွေက သစ်ပင်အောက်မှာပဲ နေရာယူခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ရုံးအဖွဲ့ဆိုတော့ တောင်ယာတဲပေါ်မှာ နေရာရလိုက်ပါတယ်။ ဆန်ကုန်နေလို့ အကြံမရ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရွာသား ဦးလေးကြီး တယောက်နဲ့တွေ့ရလို့ သူ့ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကျွန်မတို့ ဒီတောင်ယာမှာ ရောက်နေကြာင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောခိုင်းဘဲ နှုတ်ပိတ်ပြီး ဆန်သွားဝယ်ပြီး ယူလာပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီဦးလေးကြီး ပြန်လာမှ ကျွန်မတို့က ထမင်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးလေးကြီးက အဲဒီနေ့မှာ ပြန်မရောက်လာလို့ ကျွန်မတို့ အဲဒီနေ့အတွက် ညနေစာကို ဒညှင်းသီးပြုတ်ကိုပဲ မှီဝဲလိုက်ရပါတယ် (ဒညှင်းသီးက ကျွန်မတို့နယ်မှာ တောထဲမှာအလေ့ကျပေါက်တဲ့အပင်ဖြစ်တယ်)။
ဒညှင်းသီး ပေါ်ခါစဆိုတော့ စားပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ အင်ယုနဲ့ တပ်ရင်းမှူးအပါအ၀င် ရဲဘော်တချို့မှာ ဆီးကျင်သလိုလို အောင့်သလိုလိုနဲ့ ဆီးခဏခဏ သွားချင်ပေမဲ့ ဆီးသွားရခက်ပြီး ခေါင်းမူးတာတွေ ဖြစ်လာကြလို့ ဒညှင်းသီးတောက်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လို့ တော်တော်လေး ခေါင်းစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့ကို KNU ကသင်ပေးတဲ့ ဆေးသင်တန်းမှာရော ကျွန်မတို့ ကျောင်းသားတပ်က ဆရာဝန်တွေ သင်ပေးတဲ့ ဆေးသင်တန်းမှာပါ ဒညှင်းသီးတောက်ရင် ဘယ်လိုစောင့်ရှောက် ကုသရတယ်ဆိုတာ မပါတော့ ကျွန်မ ဘာလုပ်ပေးလို့ လုပ်ပေးရမှန်းမသိ ဘာဆေးပေးလို့ ပေးရမှန်းမသိနဲ့ တော်တော်လေးကို စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ထမင်းလည်း ငတ်နေတယ် ဒညှင်းသီးလည်း တောက်နေတယ်ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းဆို စခန်းသွားသိမ်းဖို့ကိစ္စ ဖြစ်မှ ဖြစ်အုန်းပါ့မလားလို့တောင် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ (ဆက်ရန်)
ဒညှင်းသီးတောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကို တပ်ရင်းက ဆေးတပ်ဆွယ်မှူးကို ဆက်သွယ်ရေးသမားကဆင့် လှမ်းအကြောင်းကြားပြီး အကြံတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရုံးအဖွဲ့က နေရာယူထားတဲ့ တောင်ယာတဲမှာ နဂိုရှိတဲ့ခေါင်းမိုးက အမိုးလုံပေမဲ့ ညဘက်မှာ မိုးသီးထန်လွန်းတော့ ခေါင်မိုးတွေလှန်ပြီး အပေါ်မှာ အကုန်စိုတယ်။ အပေါ်က မိုးကာခြုံပြီးအိပ်တော့ အစိုသက်သာမယ် ထင်ပေမဲ့ ဘေးက လေတိုက်ပြီး ပက်တဲ့မိုးရေတွေက အောက်ဘက် ၀ါးခြမ်းကို ကြိမ်ကွပ်ပြီး ခင်းထားတဲ့ အခင်းကို ကျော်ပြီး ကျောခင်းတဲ့နေရာမှာပါ အကုန်လာစိုတယ်။ အဲဒီညက ထမင်းငတ်တဲ့ည တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ဒညှင်းသီး တောက်တဲ့ည၊ မိုးရေထဲမှာ အိပ်ရတဲ့ည ဖြစ်လို့ အခုထိ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီညက လူတွေကသာ ရိက္ခာပြတ်၊ ထမင်းငတ်၊ ဒညှင်းသီးစားတော့လည်း ဒညှင်းသီးတောက်ပြီး အိပ်တော့လည်း မိုးရေထဲမှာ အိပ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ ပြည့်နေကြပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကတော့ ရန်သူစခန်းနဲ့ စခန်းရှိရာ ရွာကိုပဲ ရောက်နေကြပြီး စစ်တပ်စခန်းကို ဘယ်လိုဝင်သိမ်းမယ်၊ စစ်သားဆိုရင် အသေသာပစ်ထည့် ပြည်သူ့စစ်ဆိုရင် အရှင်ဖမ်း၊ အိမ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဘယ်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဘယ်လို အရှင်ဝင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတဲ့ အသံတွေက တော်တော်နဲ့ကို မတိတ်ကြဘူး။ ကျွန်မနဲ့ တခြားဆေးမှူးရဲမေတယောက်သာ ဘာမှဝင်မပြောပေမဲ့ ဒီအထဲမှာ ဘယ်သူ့ကို ၀င်ဖမ်းရင် ဘယ်လမ်းကနေ ဘယ်လိုဝင်ရင် ပိုကောင်းတယ် တခြားလမ်းက၀င်ရင် ဘယ်နေရကန လူတွေ့နိုင်တယ် စသည်ဖြင့် အကြံပေးပြီး ဆွေးနွေးနေတဲ့အထဲမှာ ဒညှင်းသီးတောက်နေတဲ့ အင်ယုတယောက်က အတက်ကြွဆုံးပါပဲ။
ကျွန်မတို့ ဆေးမှူးရဲမေ နှစ်ယောက်က သူတို့ ပြောနေကြတာကို အစကတော့ ဘာမှဝင်မပြောဘဲ "သူတို့ ပါးစပ်နဲ့ သတ်လိုက်တဲ့စစ်သား၊ ဖမ်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေ များလွန်းလို့ တကယ်သွားတိုက်တဲ့နေ့ကျရင် သတ်ဖို့ဖမ်းဖို့ ကျန်မှကျန်ပါ့မလားမသိဘူး" လို့ ပြောပြီး နှစ်ယောက်အတူ ရီနေတယ်။ နောက်တော့ သူတို့တွေ ပြောလို့ မပြီးနိုင် ဖြစ်နေလို့ "ခရီးစထွက်တဲ့နေ့ကနေ အခုထိ ပါးစပ်နဲ့ တိုက်နေ၊ သတ်နေ၊ ဖမ်းနေကြတာ အလောင်းလည်း မရေနိုင်တော့ဘူး၊ ရတဲ့ ကျည်ဆံတွေ သေနက်တွေလည်း မသယ်နိုင်တော့ဘူး၊ အရှင်ဖမ်းလို့ မိတဲ့ ပြည်သူ့စစ်ကလည်း မရေနိုင်တော့ဘူး ဒီတော့ ဒီညတော့ ဒီလောက် သတ်ရဖမ်းရရင် လုံလောက်ပြီထင်တယ် တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ နေ့ရောက်မှပဲ ဆက်ပြီးတိုက်ကြ ဖမ်းကြရအောင်" လို့ ဟာသလုပ်ပြောပြီး အိပ်ဖို့ သတိပေးရတယ်။ ကျွန်မက တယောက်မှ အရှင်ဖမ်းမမိပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းနေတယ်။
နောက်နေ့ မနက်လင်းတော့လည်း ဆန်သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ဦးလေးကြီးကို မျှော်နေတာ တော်တော်နဲ့ ပြန်မရောက်လာတော့ အကုန်လုံးက ဗိုက်ဆာလို့ အူလိမ်နေကြပြီ။ အတော်များများက ဒညှင်းသီး တောက်ထားတော့ ဒညှင်းသီးပြုတ်ကို ထပ်စားမရဲတော့ဘူး။ တချို့ကလည်း အဲဒီဆန်သွားဝယ်တဲ့ ဦးလေးကြီးက စစ်တပ်ကို သွားအကြောင်းကြားလိုက်ပြီလားမသိလို့ စိုးရိမ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဦးလေးကြီးက နေ့လည်မှာ ဆန်တွေသယ်ပြီး ပြန်ရောက်လာလို့ အားလုံးက ပျော်ပျော်ပျော်ပါးပါး ထမင်းချက်စားကြတယ်။ ချက်ပြုတ် စားသောက်ပြီးတာနဲ့ ညနေဘက်မှာ ကျွန်မတို့ ခရီးဆက်တော့ စစ်တပ်စခန်းရှိတဲ့ ရွာမတိုင်ခင် စခန်းမသိမ်းခင်ညမှာ အိပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာကို ညဘက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ ကျွန်မတို့ ညအိပ်ပြီး မနက်အာရုံမတက်ခင် ရန်သူစခန်းကို အရသိမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း မနက်သုံးနာရီခန့်ကနေ ကျွန်မတို့ အဆင်သင့်ပြင်ပြီး ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့တွေ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး တပ်စခန်းကို ချည်းကပ်ဖို့နဲ့ ပြည်သူ့စစ်တချို့ကို အရှင်ဖမ်းဖို့ဆိုပြီး အရင် ထွက်ပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးနဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲမေတွေပါတဲ့ ရုံးအဖွဲ့တပ်စုက နောက်မှ ဖြေးဖြေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်တပ်စခန်းကို တပ်စုနှစ်စုက နှစ်နေရာကနေ ချည်းကပ်ပြီး သူတို့ချည်းကပ်နေချိန်မှာ တပ်ခွဲမှူးက အနီးကပ် ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့ကို ဦးစီးတဲ့ တပ်စုမှူးနဲ့ အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်ရေး စက်နဲ့ စကားပြောပြီး ညွန်ကြားနေတယ်။ မနက် အာရုံတက် ငါးနာရီခန့် မလင်းတလင်းအချိန်မှာမှ သေနတ်ကစဖေါက်ပြီး အဲဒီအချိန်မှ တဘက်နဲ့ တဘက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြပြီး ချေမှုန်းရေး အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က သေနတ်စဖေါက်မှ ကျွန်မတို့က စတင်ထွက်ခွာပြီး အခြေအနေ ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိရမှ သူတို့မသွားခဲ့တဲ့ ဘက်ကနေ ရွာထဲကို ၀င်ပါတယ်။ ကျွန်မက လက်နက်ကြီး အသံကိုပဲ ဘယ်အသံက ဘာလက်နက်အမျိုးအစား ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မတတ်ပေမဲ့ လက်နက်ငယ်ဆိုရင်တော့ ဘန်း ဘန်း မြည်ရင် အေကေ၊ ဖေါင်းဖေါင်း မြည်ရင် ၁၆၊ ပက်ပေါင်း ပက်ပေါင်း မြည်ရင် ကာဘိုင်၊ ဂျိမ်း ဂျိမ်းမြည်ရင် G3, G4, ဒေါ့ ဒေါ့ ဒေါ့ ဒေါ့ မြည်ရင် စက်လတ် (Auto machine gun) ဆိုပြီး လက်နက်ငယ် အသံတွေကိုတော့ ဖမ်းလို့တတ်တော့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေစဉ် ဘယ်ဘက်က ပစ်အားသာတယ်ဆိုတာ နားထောင်ပြီး အခြေအနေ ကောင်းမကောင်းကို တပ်မှူး မပြောပြရင်တောင် သေနတ်သံကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လည်း အတော်အသင့် ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေ ကောင်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ပါတဲ့ တပ်စုက ရွာတောင်ပိုင်းဘက်က ၀င်ပါတယ်။ ညဦးပိုင်းမှာ မိုးရွာနေခဲ့ပေမဲ့ အာဇာနည် နေ့ မနက်မှာကျတော့ ရာသီဥတုက သာယာနေပါတယ်။ စစ်တပ်စခန်းက ရွာအလယ်ပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
ရွာတောင်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ တပ်က ပင်လယ်ပြင် စိုးမိုးရေးတပ်မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ မိဘတွေ ရှိပြီး လက်ရှိတပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဆေးမှူးတယောက်ရဲ့ မိဘတွေအိမ်လည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရှိတုန်းကဆို ရွာရဲ့တခြားပိုင်းမှာ ရန်သူသတင်းပေးနိုင်တဲ့ မယုံရတဲ့ သူတွေ ရှိပေမဲ့ ရွာတောင်ပိုင်းက ကျွန်မတို့နဲ့ ပိုရင်းနှီးပြီး ရန်သူသတင်းပေးဆိုလို့ ဘယ်တော့မှ မရှိတတ်ဘူး။ လုံးဝစိတ်ချရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ရွာထဲဝင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရွာသားတွေနဲ့ တွေ့ရတော့မယ်ဆိုပြီး ကျွန်မ တကယ်ကို ပျော်နေပါတယ်။ ရော်ဘာခြံထဲကနေ ရွာတောင်ပိုင်းက အိမ်များများ ရှိတဲ့နေရာကို စအ၀င်မှာ ချောင်းရိုးတခု ရှိပြီး လမ်းကို သစ်သားတံတားနဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။ တံတားကို ကူးပြီးဟိုဘက်မှာတော့ အိမ်တွေက ပိုစိမ့်ပြီး ကွမ်းသီးပင် အုန်းပင်၊ သရက်ပင်တွေ၊ အိမ်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ အရင်က ကျွန်မတို့ စားအိမ်သောက်အိမ်တွေပါပဲ။
တပ်ခွဲမှူးက "စစ်တပ်ကတော့ လစ်ပြီ။ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးကုန်ပြီ တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ စိုးရိမ်ရတာ ပြည်သူ့စစ်တွေပဲ ရှိတော့တယ် အိမ်ထဲက ချောင်းပြီး ထပစ်နိုင်လို့ သတိထားဖို့လိုတယ်" လို့ ကျွန်မတို့ကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တံတားကို ဖြတ်စဉ်မှာ တံတားပေါ်မှာ လူတယောက်ထက် ပိုမရှိနေရအောင် ဖြတ်နေတဲ့တယောက် ဟိုဘက်ထိပ်ရောက်မှ နောက်တယောက်ကို ဒီဘက်က စဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။ တံတားပေါ်မှာ အကာအကွယ်ယူစရာ ဘာမှ မရှိပေမဲ့ ဟိုဘက်ရောက်ရင်တော့ အုန်းပင်တွေကွမ်းပင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ရွာရဲ့တခြားအပိုင်းတွေမှာပဲ ကျွန်မတို့ကို ပစ်တဲ့သူ ရှိချင်ရှိမယ် ရွာတောင်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်မတို့ကို ပစ်မည့်သူ ဘယ်သူ့မှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွက်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တံတားကို ပထမတပ်စိတ်ဖြတ်တာ ရဲဘော် သုံးလေးယောက်ခန့်ပဲ ဖြတ်ရသေးတယ် ဟိုဘက်ခြမ်းက "ပက်ပေါင်း ပက်ပေါင်း" ဆိုတဲ့ ကာဘိုင်သံ နှစ်ချက် ကြားလိုက်လို့ ဖြတ်ကူးတာ ခဏနားထားရတယ်။ တပ်ခွဲမှူးပြောတာ မှန်နေတယ် ကျွန်မထင်တာ မှားသွားပြီ ရွာတောင်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ကို ပစ်မည့်သူ ရှိတာကို သိလိုက်ရလို့ တော်တော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ သေနတ်သံက နှစ်ချက်ပဲ ကြားပြီး နောက်ဆက်မကြားတော့တဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်မတို့ တံတားကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒီဘက်ရောက်တော့ အိမ်တွေက စိမ့်လာပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ ချေမှုန်းရေးတပ်တွ ရှိတဲ့ နေရာကိုအသွားမှာ အိမ်ထဲက ချောင်းပြီး ထပစ်မှာစိုးလို့ တော်တော်လေး သတိထားပြီး သွားရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ရွာထဲ စ၀င်တဲ့အချိန်ကစပြီး တပ်ခွဲမှူး မင်းဇော်သူတယောက် ပါးစပ်တချက်မှ မပိတ်တော့ဘဲ "အိမ်တွေထဲမှာ ပုန်းနေတဲ့ ပြည်သူစစ်တွေ လက်နက်ချပြီး ထွက်အဖမ်းခံပါ။ အိမ်တွေထဲက သေနတ်သံ တချက်မှ မကြားချင်ဘူး၊ ချောင်းပစ်ဖို့တော့ လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ သေနတ်သံကြားတဲ့အိမ် ပြာကျပြီသာ မှတ်ပါ။ RPJ သမား၊ 79 သမားနဲ့ စက်လတ်သမားတွေ အိမ်တွေထဲက သေနတ်သံကြားရင် ဘာအမိန့်မှ စောင့်မနနဲ့ အဲဒီ သေနတ်သံကြားတဲ့ အိမ်ထဲကို ချက်ချင်း ပစ်ထည့်ပါ။ ပြည်သူ့စစ်တွေနော် ခင်ဗျားတို့ လူစွမ်းကောင်း မလုပ်ကြနဲ့ စစ်တပ်တောင် ကြောက်လို့ ခင်ဗျားတို့ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားပြီ ခင်ဗျားတို့က သူတို့အတွက် သူရဲကောင်းလုပ်နေရင် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါ" လို့ အိမ်များတဲ့ အပိုင်းကို စ၀င်တဲ့အချိန်ကစပြီး တချိန်လုံး အော်ပြောပြီး လိုက်လာတယ်။ အိမ်အောက် ကတုတ်ကျင်းထဲမှာ ပုန်းနေတဲ့ ရွာသားတချို့က နောက်ပိုင်းမှာ အပြင်ထွက်လာကြတော့ ကျွန်မတို့ကိုတွေ့ပြီး "ဟယ် အင်ယုတို့မငယ်တို့လည်း ပါလာတယ်" ဆိုပြီး မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်လို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ထနှုတ်ဆက်ကြလို့ ကျွန်မကလည်း ရွာထဲ ပြေးဝင်နေတဲ့ အရှိန်ကို အနည်းငယ်လျှော့ပြီး "နေကောင်းလား ကျန်းမာလား" မေးနေတော့ တပ်ခွဲမှူးက "အလွမ်းသယ်ရမည့် အချိန်မဟုတ်ဘူး" ဆိုလို့ "နောက်မှတွေ့မယ် ရွာလည်ကို လိုက်လာနော့်" ဆိုပြီး မှာထားခဲ့တယ်။ တပ်ခွဲမှူးက အိမ်အောက် ကတုတ်ကျင်းထဲကနေ ထွက်လာကြ့ပီး အိမ်အောက်မှာ ပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ ထချောင်းကြည့်နေတဲ့ ရွာသားတွေကို " စစ်တပ်က စစ်သားတွေ ဒီဘက်ကို ပြေးလာသေးလား၊ စစ်သားတွေ ခင်ဗျားတို့ အိမ်ထဲမှာ ၀င်ပုန်းနေတာ ရှိလား" နဲ့ လိုက်မေးနေလို့ ရွာသားတွေကလည်း စစ်သားတွေ ဒီဘက် မရောက်လာကြောင်းနဲ့ ပြေးရင်လည်း ဒီဘက်ကိုတော့ ပြေးမှာ မဟုတ်ဘဲ မြောက်ဘက်ကိုပဲ ဦးတည်ပြေးနိုင်ကြောင်း ပြန်ဖြေနေတယ်။ (ဓါတ်ပုံက အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်း 1/89 သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ဖြစ်ပြီး စံပြသင်တန်းသားဆု ရတဲ့တယောက်က ဒီတိုက်ပွဲကို ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ခွဲမှူး ဖြစ်လာသူ မင်းဇော်သူ ဖြစ်ပြီး အနောက်က မတ်တပ်ရပ်နေသူ အားလုံးက သင်တန်းဆရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
တနေရာရောက်တော့ ကျွန်မတို့ တပ်ရှိစဉ်က တည်းခိုနေကျ အိမ်က အမကြီးတယောက် အုန်းပင်ကို အကာအကွယ်ပြုပြီး ထိုင်ငိုနေတာကို တွေ့တေယ်။ အဲဒီအစ်မကြီးက ဒီရွာမှာ ကျွန်မတို့ တပ်ထိုင်ခဲ့စဉ်က စစ်ကြောင်း အပြင်သွားတုန်း ရန်သူရုတ်တရက် ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန် နေမကောင်းလို့ ရွာမှာ ကျန်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေက ရော်ဘာခြံထဲမှာ ပြေးပုန်းနေရစဉ် စစ်တပ်မသိအောင် ရဲဘော်တွေကို ထမင်းခိုးပို့ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့က "အစ်မနေကောင်းလား ဘာလို့ငိုနေလဲ၊ ရွာလည်မှာ တွေ့မယ် လိုက်လာနော့်" လို့ ပြောပြီး နှုတ်ဆက်တာကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ငိုပဲငိုနေတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ရှေ့ကို ဆက်လာရင်း ရွာလည်က တပ်တွေနဲ့ တွေ့တော့ ပြေးမ၀င်တော့ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးပဲ လမ်းလျှောက်ပြီး စစ်တပ်ရှိရာနေရာကို လာလိုက်တယ်။ စစ်တပ်ရှိရာနေရာကို ရောက်တော့ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ သေနတ်တွေ ကျည်ဆံတွေ စာရွက်စာတမ်းတွကို အလံတိုင်နားမှာ ပုံပြီးတော့ ရဲဘော်တွေက အောင်ပွဲခံနေကြတယ်။ ((အပေါ်ပုံကတော့ တပ်ခွဲ (၁) ရှေ့တန်းတနေရာ ဖြစ်ပြီး အောက်မှာ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ၁၉၉၀ က တပ်ခွဲ (၂) ကို ကျွန်မတို့ ရှေ့တန်းဆင်းတုန်းက ပုံဖြစ်တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာမဟုတ်ပါ။)
ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်တော့ ပြည်သူ့စစ်လေးတယောက် ကာဘိုင်သေနတ်လေး တလက် ဘေးနားမှာ ကျလျက် နဖူးတည့်တည့်မှာ ၁၆ ကျည်မှန်ပြီး ပက်လက်အနေအထားနဲ့ သေနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ခုနက ကျွန်မတို့အဖွဲ့ တံတားအကူးမှာ ပစ်တာ သူပဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပစ်ပြီးတာနဲ့ သူအားကိုးရာ စစ်တပ်ရှိရာနေရာကို အလာမှာ ရောက်တော့ သူ့သခင်တွေက ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးကုန်ပြီမို့ တယောက်မှ မရှိတော့လို့ ဘယ်ပြေးရမှန်းမသိ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဟိုဘက်က ၀င်လာတဲ့ ကျွန်မတို့တပ် ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့က လာတဲ့ကျည်ဆံနဲ့ ထိသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်မ တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ပါလာတဲ့ ဆေးမှူး မောင်လွင်က ကျွန်မနားလာပြီး ဂုဏ်ယူတဲ့ လေသံနဲ့ "မငယ် ကျနော်က ဆေးလည်းကုတယ် လက်လည်းတည့်တယ်နော့် တွေ့လား" လို့ လာပြောနေလို့ အကျိုးအကြောင်းကို မေးကြည့်တော့ ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့မှာ ဆေးမှူးမောင်လွင် တယောက်ပဲ ၁၆ သေနတ် ကိုင်သမားရှိပြီး ကျန်တဲ့ လက်နက်ငယ်သမား အားလုံးက အေကေသမားတွေပဲလို့ သိရတယ်။ အခုသေနေတဲ့ ပြည်သူ့စစ်က ၁၆ ကျည်ထိထားလို့သာ သူ့လက်ချက်နဲ့ သေတယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေပေမဲ့ အမှန်က သူချိန်ရွယ်ပြီး ပစ်လိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မက သူ့ကံနဲ့သူ ထိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပေမဲ့ "နင့်လက်ချက်နဲ့ လူတယောက်သေတာကို နင်တော်တော်ပျော်နတာပေါ့လေ" လို့ပြောလိုက်တာကို သူက "ရန်သူသေတာ မပျော်လို့ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုနေရမလဲ" လို့ ပြောနေတာကို "ရွာသားသေတာ ငါတော့မပျော်နိုင်ဘူး" လို့ပဲ ပြန်ပြောပြီး ကျွန်မ ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ စုရုံးရောက်ရှိလာတဲ့ ရွာသားတွေကို တပ်ခွဲမှူးက " ဒီရွာက ပြည်သူ့စစ်တွေက စစ်တပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လူထုကို အနိုင်ကျင့်တာ သိပ်နာမည်ထွက်နေတယ်၊ ပြည်သူ့စစ်တွေ သိပ်ပြီး အနံကြီးကွင်းကျယ် မလုပ်ကြနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ရွာကို ကျွန်တ်ာတို့ အချိန်မရွေး ၀င်လို့ရတယ် တွေ့လား။ ရွာနာမှာ စိုးလို့သာ မ၀င်တာ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ရွာမှာ ရှိတဲ့ စစ်တပ်ကို လုံးဝဂရုစိုက်ဘူး" လို့ ပြောနေတာ တွေ့သလို မိယုတယောက်လည်း ဆက်သွယ်ရေးစက်တက်ဖို့ ကွမ်းပင် နှစ်ပင်မှာ ကြိုးတန်းပြီး တပ်ရင်းကို တိုက်ပွဲသတင်းပို့နေတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ကျွန်မတို့တပ်က ရဲဘော်တွေ အကုန်ပျော်ကြတယ် မပျော်တဲ့သူဆိုလို့ ကျွန်မတယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ စစ်သားတွေက တယောက်မှ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ပြည်သူ့စစ်က ဓါးစာခံဖြစ်သွားတာကို ကျွန်မတကယ်ကို ယူကျုံးမရခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ အခုသေသွားတဲ့ ပြည်သူ့စစ်လေးက ခုနက ကျွန်မတို့ ရွာထဲဝင်လာတုန်းက ငိုနေတဲ့ အစ်မရဲ့ တူလို့ သိလိုက်ရလို့ ဒီအစ်မ ဘာကြောင့်ငိုနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ အများအမြင်မှာ သေသွားတဲ့ ကလေးက ပြည်သူ့စစ်ပဲ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ ခိုင်းလို့လုပ်ရတာ ဖြစ်လို့ အရပ်သားဟာ အရပ်သားတယောက်ပါပဲ။ တပ်နှစ်တပ်ကြားမှာ ပြည်သူလူထုဟာ ကျွဲနှစ်ကောင်ခပ်တဲ့ ကြားက မြေစာပင်ပဲဆိုတာ ကျွန်မတကယ်ကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲက နိုင်ပေမဲ့ မပျော်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ၊ ABSDF မှာ ကျွန်မ နောက်ဆုံး ကြုံဖူးတဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲက လက်တွေ့မှာ နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ဘက်က ရှုံးခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲ ကလည်း ဒီရွာမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီတိုက်ပွဲတုန်းကတော့ လက်တွေ့မှာ ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
( တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်နဲ့ သတ္တိဗျတ္တိပြည့်စုံတဲ့ ဒီတိုက်ပွဲကို တပ်ခွဲမှူးအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သူ မင်းဇော်သူ (ကျဆုံး) ကို သတိတရနဲ့ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ တပ်ခွဲမှူးဖြစ်သူ ရဲဘော်မင်းဇော်သူနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ရဲမေ အင်ယုနာမည်ပဲ နာမည်အမှန်ဖြစ်ပြီး တခြားနာမည်တွေက နာမည်အရင်းတွေ မဟုတ်ပါ။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အခုထိ အသက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတကာရောက် ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းများအနေနဲ့ အချက်အလက်လိုအပ်တာ ရှိရင် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။)
July 8, 2011 at 6:54 AM Reply
July 8, 2011 at 6:58 AM Reply
July 8, 2011 at 7:00 AM Reply
July 8, 2011 at 7:02 AM Reply
"စစ်သားတွေက တယောက်မှ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ပြည်သူ့စစ်က ဓါးစာခံဖြစ်သွားတာကို ကျွန်မတကယ်ကို ယူကျုံးမရ ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ အခု သေသွားတဲ့ ပြည်သူ့စစ်လေးက ခုနက ငိုနေတဲ့ အစ်မရဲ့ တူလို့ သိရတယ်။ အများအမြင်မှာ သေသွားတဲ့ ကလေးက ပြည်သူ့စစ်ပဲ။ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ ခိုင်းလို့လုပ်ရတာ ဖြစ်လို့ အရပ်သားဟာ အရပ်သားတယောက်ပါပဲ။ တပ်နှစ်တပ် ကြားမှာ ပြည်သူလူထုဟာ ကျွဲနှစ်ကောင်ခပ်တဲ့ ကြားက မြေစာပင်ပဲ ဆိုတာ ကျွန်မ တကယ်ကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ နိုင်ပေမဲ့ မပျော်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ၊ ABSDF မှာ ကျွန်မ နောက်ဆုံး ကြုံဖူးတဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲက လက်တွေ့မှာ နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။"
လို့ မငယ်နိုင် ရေးထားတာကို ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
"ဒီတိုက်ပွဲက လက်တွေ့မှာ နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်" ဆိုတဲ့ မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့ စကားလေးက တကယ့် အမှန်တရားပါ။ စစ်ပွဲ ဆိုတာ တကယ်တော့ စစ်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်တဲ့ တပ်နှစ်တပ်လုံးအတွက် ကိုယ့်ဘက်က နိုင်လည်း ရှုံး၊ ကိုယ့်ဘက်က ရှုံးလည်း ရှုံးတာပါ။ စစ်ပွဲကို ပြည်သူတွေဘက်က အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် အရှုံးချည်းသက်သက်
မငယ်နိုင် ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ထက် အများကြီး ပိုဆိုးရွားတဲ့ ကြေကွဲစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေဟာ နယ်စွန်နယ်ဖျားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လူမသိသူမသိ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေတုန်းပါ။ စစ်အုပ်စုက တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေကို ပစ်မှတ်ထား ထိုးစစ်ဆင်ပြီး တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း (ဥပမာ - KNU နဲ့ DKBA)၊ ပြည်သူအချင်းချင်း (ဥပမာ - နာမည်အမျိုးမျိုး ပြောင်းခေါ်လာတဲ့ ပြည်သူ့စစ် နဲ့ KNU) တိုက်ခိုင်းနေတဲ့ စစ်ဝါဒ မချုပ်ငြိမ်း သေးသရွေ့ ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မကျဆုံးသေးသရွေ့ မငယ်နိုင် ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လို ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကို ပြည်သူတွေ ဆက်လက် ကြုံတွေ့ ခံစားနေရဦးမှာပါ။
July 8, 2011 at 7:59 AM Reply
July 8, 2011 at 10:46 AM Reply
8 Jul 11, 06:13 AM
namengelay: မငယ်နိုင်ရေးတဲ.တစ်ခုသော7 JULYမှာကြုံခဲ.ဘူးတဲ.တိုက်ပွလြေးတစ်ခုအကြောင်းကိုဖတ်ရတာအရမ်းသဘောကျပါတယ်။နောက်ကိုလည်းABSDFတိုက်ပွဲအကြောင်းတွေများများရေးစေချင်ပါတယ်။ညီမလည်းအားကျလို.ပါနော်။message
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၁) says:
July 8, 2011 at 2:35 PM Reply
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၁)
၀ါရှင်တန် ဒီစီရှိ ရှိ အမေရိကန် ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သံရုံး ဒုတိယအကြီးအကဲ သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်း သည် သူရာထူးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မိသားစုနှင့် အတူ ဇူလိူင်လ ၄ ရက်နေ့က အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံ လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်းမှ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ထံသို့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်က စာရေးသားပြီး ထိုသို့ ခိုလုံခွင့် တောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးကျော်ဝင်းမှ သူရေးသားသော စာထဲတွင် မြန်မာ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည့် မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေသဖြင့် သူအနေဖြင့် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စာထဲတွင် ဖေါ်ပြ ထားသည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၂) says:
July 8, 2011 at 2:36 PM Reply
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၂)
ထိုကဲ့သို့ မြန်မာမှ ထိပ်တန်း သံမှူးကြီး တဦး အနေဖြင့် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသည့် အပေါ် မည်ကဲ့သို့ မြင်ပါသလဲဟု လန်ဒန်မြို့တွင် နေထိုင်သော အဝေးရောက် မြန်မာသံ တမန်ဟောင်း တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ကြည်ကို မေးကြည့်ရာ သူ့က သူ၏ အမြင်ကို ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ကျနော့်အနေနဲ့ အခုလို သံမှူးကြီးတဦးအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းဆို တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝမ်းလည်း ဝမ်းသာပါတယ်။ အမေရိကန်က လူတွေလည်း ကြိုဆိုကြသလို တခြား လူတွေလည်း ကြိုဆိုကြပါတယ်။ အခု မြန်မာ သမ္မတက မုတ်ဆိုးက အတောင်တွေ ချိုးထားတဲ့ ငှက်လို မပျံနိုင်ဘူး။ ပြောရမယ် ဆိုရင် သမ္မတဟာ အလကား အကောင်။ အစိုးရဆိုတာ အစိုးရ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ရမယ်၊ အခုက မလုပ်နိုင်ဘူး။ မြန်မာအစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်မယ့် အစိုးရ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို အထဲလူတွေရော၊ အပြင်ကလူတွေ ပါသိအောင် သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်းက ဖွင့်ချ လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ အင်မတန် ကြိုဆိုဖို့ ကောင်းပါ တယ်။”
၎င်းပြင် ဦးခင်မောင်ကြည်က ယခုမြန်မာအစိုးရသစ်၏ ပါလီမန်ဆိုသည်မှာလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ပါလီမန်ဖြစ်သလို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည်လည်း စစ်တပ်က ကြိုးကိုင်ထားသော အစိုးရ သာဖြစ်သည်ဟု ဆက် ပြောသည်။
“ အဲ… ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီအစိုးရဟာ စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ နောက်က ကြိုးကိုင်ထားတဲ့ အစိုးရသာ ဖြစ်တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အခု ပါလီမန်တို့ဘာတို့ တကယ့် အမှန်အကန်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ပါလီမန် အမတ်တွေဆိုတာကလည်း အခိုင်းခံတွေပဲ။ နိုင်ငံမှာ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးတို့၊ ပညာရေးတို့ အတွက်တော့ ဘာမှ မလုပ်ဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေဟာ အလကား ဖြစ်သွား တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခု သမ္မတတွေ ပါလီမန်အမတ်တွေကို လစာတွေ ပေးနေရတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ကုန်တယ်။ အလုပ်လုပ်လို့ ထိုက်တန်တဲ့သူကို ပေးရတာအရေးမကြီးဘူး။ အခု အစိုးရ အဖွဲ့ဆိုတာက တိုင်းပြည် အတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ။ ပါလီမန်အမတ်တွေထဲက ကြံ့ဖွံ့ပါတီ မဟုတ်ပဲ တခြားပါတီက အမတ်တွေဆိုရင်လည်း အနိုင်ရခဲ့တာ အလကားပဲ။ ဘာမှ မလုပ် နိုင်ဘူးလေ။”
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၃) says:
July 8, 2011 at 2:38 PM Reply
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၃)
ယခုဆိုလျှင် ဗမာ့စစ်တပ်ထဲတွင်လည်း တစစပြိုကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်လည်း ပြိုကွဲတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ကြည်က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“အခုဆိုရင် တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗမာစစ်တပ်က စစ်သားတွေ ကလည်း စစ်သားစိတ် မရှိတော့ဘူး။ စစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် အဲသလို ဖြစ်နေကြတယ်။ လုမယ်၊ သတ်မယ်၊ မုဒိမ်းကျင့်မယ် အဲလိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် အခုသူတို့ စစ်တပ်ဟာ ရှုံးနိမ့်နေပီ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကရင်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ သူတို့မှာက စစ်သားကောင်း မရှိတော့ဘူး။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာက အမျိုးသားရေးအရ စိတ်ဓာတ်က ထိပ်ဆုံးက ရှိနေရ မယ်။ အခုက ဗမာ့တပ်မတော်တခုလုံးဟာ စိတ်ဓာတ်က ပျက်စီးနေပြီ။ ဂိတ်တွေဖွင့် အခွန်တွေ အများကြီး ကောက်မယ်၊ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေမှာ သောင်းကျန်းမယ်။ မှောင်ခိုကူးမယ်၊ စစ်တပ်က အဲသလို စီးပွါးရေး လုပ်နေကြပြီ။ ပြီးတော့ သူတို့အထဲမှာ ကိုယ်တိုင်က ပြိုကွဲတော့မှာ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နအဖ ခေတ်တုန်းက ကောင်းစားနေခဲ့ပြီးတော့ အခု ဘေးထွက်သွားတဲ့ အကောင်တွေ ရှိတယ်။ နောက် အခုဟာက သိန်းစိန်က စစ်တပ်ကို အမိန့်အာဏာပေးလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ့ထက်ကြီးတယ်လေ။ စစ်တပ် ဦးသိန်းစိန် လက်အောက်မှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖခေတ်က တချို့ တိုင်းမှူးတို့ တခြား အရာရှိတွေကလည်း အခုအစိုးရအပေါ် မကျေနပ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချိန်က သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ နောက်လူတွေ ဝင်သွားလို့လေ။ အဲဒါကြောင့် တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မှာ သေချာပါတယ်။ ခုလို အခြေ အနေမျိုးမှာ သံမှူကြီး ဦးကျော်ဝင်းက ဘက်ပြောင်းလာတော့ သိပ်ကောင်းသွားတာပေါ့။ နိုင်ငံခြားက လူတွေရော ပြည်သူတွေရော အကုန်လုံး အခြေအနေမှန် သိသွားရတာ သိပ်ကောင်းတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ယခုဆိုလျှင် ဗမာ့စစ်တပ်ထဲတွင်လည်း တစစပြိုကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်လည်း ပြိုကွဲတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း လန်ဒန်မြို့တွင် နေထိုင်သော အဝေးရောက် မြန်မာသံတမန်ဟောင်း ဦးခင်မောင်ကြည်က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“အခုဆိုရင် တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗမာစစ်တပ်က စစ်သားတွေ ကလည်း စစ်သားစိတ် မရှိတော့ဘူး။ စစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် အဲသလို ဖြစ်နေကြတယ်။ လုမယ်၊ သတ်မယ်၊ မုဒိမ်းကျင့်မယ် အဲလိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် အခုသူတို့ စစ်တပ်ဟာ ရှုံးနိမ့်နေပီ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကရင်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ သူတို့မှာက စစ်သားကောင်း မရှိတော့ဘူး။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာက အမျိုးသားရေးအရ စိတ်ဓာတ်က ထိပ်ဆုံးက ရှိနေရ မယ်။ အခုက ဗမာ့တပ်မတော်တခုလုံးဟာ စိတ်ဓာတ်က ပျက်စီးနေပြီ။ ဂိတ်တွေဖွင့် အခွန်တွေ အများကြီး ကောက်မယ်၊ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေမှာ သောင်းကျန်းမယ်။ မှောင်ခိုကူးမယ်၊ စစ်တပ်က အဲသလို စီးပွါးရေး လုပ်နေကြပြီ။"
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၄) says:
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၄)
"ပြီးတော့ သူတို့ စစ်တပ်အထဲမှာ ကိုယ်တိုင်က ပြိုကွဲတော့မှာ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နအဖ ခေတ်တုန်းက ကောင်းစားနေခဲ့ပြီးတော့ အခု ဘေးထွက်သွားတဲ့ အကောင်တွေ ရှိတယ်။ နောက် အခုဟာက သိန်းစိန်က စစ်တပ်ကို အမိန့်အာဏာပေးလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ့ထက်ကြီးတယ်လေ။ စစ်တပ် ဦးသိန်းစိန် လက်အောက်မှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖခေတ်က တချို့ တိုင်းမှူးတို့ တခြား အရာရှိတွေကလည်း အခုအစိုးရအပေါ် မကျေနပ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချိန်က သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ နောက်လူတွေ ဝင်သွားလို့လေ။ အဲဒါကြောင့် တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မှာ သေချာပါတယ်။ ခုလို အခြေ အနေမျိုးမှာ သံမှူကြီး ဦးကျော်ဝင်းက ဘက်ပြောင်းလာတော့ သိပ်ကောင်းသွားတာပေါ့။ နိုင်ငံခြားက လူတွေရော ပြည်သူတွေရော အကုန်လုံး အခြေအနေမှန် သိသွားရတာ သိပ်ကောင်းတာပေါ့” ဟု လန်ဒန်မြို့တွင် နေထိုင်သော အဝေးရောက် မြန်မာသံတမန်ဟောင်း ဦးခင်မောင်ကြည်က ဆက်လက် သုံးသပ်ပြသည်။
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၅) says:
July 8, 2011 at 2:50 PM Reply
အစိုးရစစ်သားတွေက ဓါးမြ၊ သခိုး၊ မုဒိမ်းကောင် တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားကောင်းစိတ် မရှိတော့လို့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို ရှုံးကာ တပ်တွင်း ပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်က ပြိုကွဲတော့မယ် (၅)
ဦးကျော်ဝင်း၏ ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပယ်ချခြင်းများကို ခံခဲ့ရပြီး အပြစ်တင် ဝေဖန်ခံနေရသောကြောင့် လုပ်သက်စေ့လို့ မြန်မာပြည် ပြန်သွားလျှင် အရေးယူ ခံရမည့် အနေအထားများ ရှိနေကြောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန်ထံသို့ ပေးပို့သော စာတွင် ပါရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနှင့် မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် သူတို့နှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကို ဆက်လက် ထိန်းထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဦးကျော်ဝင်းက သူ၏ စာတွင် တိုက်တွန်း ထားသည်။
၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းကလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့နိုင်ရန် ဖိအားပေးကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးကျော်ဝင်းက ပြောသည်။
ဦးကျော်ဝင်းသည် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က သံအရာရှိအဖြစ် စတင် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ လုပ်သက် ၃၁ နှစ် ကြာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး ယခု သူ့၏ နှုတ်ထွက်စာကို မြန်မာ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးထံ လိပ်မူ ပေးပို့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
July 8, 2011 at 7:06 PM Reply
တပ်တွင်းပြိုကွဲမယ်ပြောတာ အတော်ကြာနေပါပြီ ခုထိမကွဲသေးဘူး။ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကတော. မိုးသီးတို.နှစ်ယောက် အဝေမတည်.ကတည်းက နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတာ ခုထိမပေါင်းနိုင်သေးဘူး
July 8, 2011 at 7:07 PM Reply
စီဘောက်မှာ မငယ်နိုင်အကြောင်း အကောင်းရေးသွားတာလေးတွေကို update ဖြစ်အောင် ကိုယ်.ဘာကို ကွန်းမန်.ပြန်ပေးပါအုံး
July 9, 2011 at 2:13 AM Reply
မငယ်နိုင်ရဲ့ comment ကို မင်း ဖတ်ချင်တယ်လား ..
အေး ... အေး ... တင်ပေးမယ် ..
မငယ်နိုင် မအားလို့ ငါ တင်ပေးမယ် ..
ခွေးတွေက ဟောင်လို့ အခုထိ မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ပြီးဖို့ နေနေသာသာ သခင်အားပေး ခွေးတွေဆိုတော့ ဟောင်သံက ပိုတောင် ကျယ်လာသေးတယ်။
ဟောင်တာ ဒီမှာ လာဟောင်တာတင် မကဘူး။ သူတို့ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း ကျွန်မ ဓါတ်ပုံတွေ ခိုးတင်၊ ပေါက်ကရတွေ စွပ်စွဲရေးသားပြီး ဟောင်ထားကြတာ အများကြီးပဲ။
July 9, 2011 at 2:24 AM Reply
မင်းအတွက် မငယ်နိုင်ရဲ့ comment ကို မငယ်နိုင်က post အဟောင်းမှာ တင်ထားလို့ မင်း မမြင်ဘဲ နေမှာစိုးလို့ ငါ ထပ်တင်ပေးမယ် ..
- zaw - တကယ် မငြိမ်းချမ်းတာက မင်းတို့ပါ။ ငါကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ ကိုယ်သိတဲ့ နည်းနည်းလေးကို ကိုယ့်လောက် မသိသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာ ကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူတွေ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်အများကြီး လာဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေ ရှိတော့ ကိုယ်တိုင်ရော တခြား လာလည်သူတွေပါ မသိသေးတာ၊ မသိခဲ့တာကို ထပ်သိရနဲ့ ဟန်ကိုကျနေတာပဲ။
ငါ့ဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူဖတ်၊ မကြိုက်တဲ့သူ မဖတ်ဘဲနေနိုင်ပ်လျက်နဲ့ မကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ မင်းတို့ကတော့ ငါ့ပို့စ်တွေကို မကြိုက်ဘူးလို့သာ ပြောတယ်၊ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာတာ အကုသိုလ်များတယ်လို့လည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဖူးတယ်။
မလာရလည်း မနေနိုင်၊ မဖတ်ရရင်လည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ မင်းတို့မှ တကယ် ၀ဋ်ကြွေးခံနေရတဲ့သူ အစစ်အမှန်တွေပါ။ မဖတ်ချင်ဘဲ ဖတ်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး၊ မလာချင်ဘဲ လာနေရတဲ့ဝဋ်ကြွေး၊ မပတ်သက်ချင်ဘဲ ပတ်သက်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေက အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံမှတပါး ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။
July 9, 2011 at 2:58 AM Reply
တပ်တွင်းပြိုကွဲမယ်ပြောတာ အတော်ကြာနေပါပြီ ခုထိမကွဲသေးဘူး။
ကွဲမှာ .. ကွဲမှာ ..
မကွဲမှာ ပူမနေနဲ့ ..
တပ်က ကွဲကို ကွဲမှာ ..
မြေကြီးလက်ခတ်လို့် လွဲရင်လွဲမယ် .. တပ် ပြိုကွဲမှာက သေချာတယ် ..
ငါတို့ သိပ်စောင့်စရာ မလိုတော့ဘူး ..
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် လူသတ်ကောင် သူခိုးကြီး သန်းရွှေက တပ် ပြိုကွဲမှာကို သိနေလို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်မပြေးရခင် အခုကတဲက ခိုးထားတဲ့ ပြည်သူ့ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂ဝဝဝ ကျော်ကို မြန်မာပြည်မှာ မထားဘဲ စင်ကာပူက ဘဏ်တွေကို ကြို ရွှေ့ထားပြီးပြီ ..
ပြီးတော့ တပ်ပြိုကွဲလို့ သန်းရွှေက ပထွေးတရုတ်တွေ တိုင်းပြည်ကို ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးပြီးရင် ပထွေးတရုတ်တွေ တိုင်းပြည်မှာ ခွေးလိုဝက်လို မနေရအောင် ပထွေးတရုတ်တွေ တိုင်းပြည်မှာ နန်းတော်လို အိမ်ကြီး၊ ခြံကြီးတွေ ဝယ်ထားပြီးပြီ ..
သန်းရွှေ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးတဲ့အချိန်ကျရင် မင်းလဲ ခွေးသေဝက်သေ မသေအောင် အခုကတဲက အမေရိကန်က မြန်မာအခွန်ဆက်ကြေး ၁ဝ% တောင်းတဲ့ရုံး (မြန်မာသံရုံး) က သံမှူးကြီး ကျော်ဝင်းလို ဘက်ပြောင်းဖို့ ပြင်ထားပေတော့ ..
မင်း ခွေးသေဝက်သေ မသေအောင် ငါ အကြံပေးတာ ..
July 9, 2011 at 8:03 AM Reply
မောင် နဲ့zaw က လူ ၂ ယောက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ၁ ယောက်ထဲပါ။ အဲဒီကောင်က၇ု၇ှားကစစ်သားပါ။ အဲဒီကောင်က မောင် နဲ့zaw ဆိုတဲ့နာမည်တွေအပြင် mg ၊ SV ယောက်ျား၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.)၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်)၊ မှော်ဆရာ၊ ဦးသူတော်၊ တုတ်ကြီး၊ တုတ်ကြီး(ခေတ္တ-၊ hanzaw ဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုသုံးပီးေ၇းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်(မောင် ခေါ် zaw)က ဘလော့၇ှင်ကို အေ၇မ၇အဖတ်မ၇ အလေဏတောတွေေ၇းပီးတလှည့်၊ မမှန်သတင်းတွေလွှင့်ပီးတမျိုး၊ ယုတ်ယုတ်၇ိုင်း၇ိုင်းဆဲဆိုပီးတဖုံ နည်းမျိုးစုံနဲ့နှောင့်ယှက်နေတဲ့ကောင်ပါ။
မောင် နဲ့zaw က လူ ၂ ယောက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ၁ ယောက်ထဲပါ။ အဲဒီကောင်က၇ု၇ှားကစစ်သားပါ။ အဲဒီကောင်က မောင် နဲ့zaw ဆိုတဲ့နာမည်တွေအပြင် mg ၊ SV ယောက်ျား၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.)၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်)၊ မှော်ဆရာ၊ ဦးသူတော်၊ တုတ်ကြီး၊ တုတ်ကြီး(ခေတ္တ-နော်ဝေ)၊ hanzaw ဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုသုံးပီးေ၇းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်(မောင် ခေါ် zaw)က ဘလော့၇ှင်ကို အေ၇မ၇အဖတ်မ၇ အလေဏတောတွေေ၇းပီးတလှည့်၊ မမှန်သတင်းတွေလွှင့်ပီးတမျိုး၊ ယုတ်ယုတ်၇ိုင်း၇ိုင်းဆဲဆိုပီးတဖုံ နည်းမျိုးစုံနဲ့နှောင့်ယှက်နေတဲ့ကောင်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး အတွက် အမှတ်တရစကား says:
July 9, 2011 at 10:10 AM Reply
အာဇာနည်သူရဲကောင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး စစ်အစိုးရ၏ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခံရခြင်း ၃၅ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် ပြောကြားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး အတွက် အမှတ်တရစကား
ဒီနေ့ဟာ ကျမတို့ အနေနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်တာနဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေကို ကာကွယ်တာကို အသစ်တဖန် ထပ်လောင်း ပြောဆိုရမယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို စစ်အစိုးရက ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရော၊ ကမ္ဘာပေါ်က တခြား ဒေသတခုခုမှာပါ တခြားလူ တယောက်ယောက်ကို နောက်ထပ် ထပ်မံ ဖြစ်ပျက်တာကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခွင့်ပြုရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူသားတယောက်ရဲ့ အနှစ်သာရက စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိမှု နဲ့ တွေးမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဒီ လူသားသဘာဝကို ကျမတို့ကို ခွင့်မပြုဘူး ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာမှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး အသိတရားမရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
July 9, 2011 at 10:11 AM Reply
ကျမတို့ရဲ့ အာဇာနည်တွေနဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ကျမတို့ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးမှုကို ခံစားနိုင်ခွင့် သေချာပေါက် ရအောင် လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီ အခွင့်အရေးတွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံး အခွင့်အရေးက အသက်ရှင်နေနိုင်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာ သူတယောက်ထဲရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် စစ်အစိုးရရဲ့ ကြိုးပေးကွပ်မျက်တာကို ခံခဲ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူမျိုးအားလုံးအတွက် ဘေးကင်းရန်ကင်း နေထိုင်နိုင်တဲ့နေရာ ဖြစ်စေချင်တဲ့ မြန်မာအများအပြားရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် စစ်အစိုးရရဲ့ ကြိုးပေးကွပ်မျက်တာကို ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီအချက်ကြောင့် ကျမတို့ဟာ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ၃၅ နှစ် အထိမ်းအမှတ်နေ့ကို ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ဆိုတဲ့ သတ္တိပြောင်မြောက်တဲ့ သူရဲကောင်းတယောက်ထဲအတွက် သတိရတာ မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးအတွက် သတိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြရပါမယ်။ ဒီလို ယုံကြည်နိုင်ကြဖို့အတွက် မတရား ကျမတို့မှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ထောင်နိုင်ခွင့်တွေ ရှိရပါမယ်။ ဒီ အခွင့်အရေးတွေ အားလုံးကို စစ်အစိုးရက ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို မပေးပဲ ငြင်းဆန်ခဲ့တာပါ။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ကြဖို့ အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ ကျမတို့အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ပြည်သူ အများအပြား ဒီနေ့မှာ ဒီနေရာကို စုရုံးရောက်ရှိလာကြတာကို ကျမ အရမ်း အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီလို ညီညွတ်မှုကို ပြသမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလို ညီညွတ်မှုကို ပြသမှုဟာ ကျမတို့နိုင်ငံတဝှမ်းကို ပျံ့နှံ့သွားမယ်လို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အာဇာနည်တွေနဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်တုတွေရှေ့မှာ ကျမတို့ ရပ်ပြီး "ရှင်တို့ရဲ့ စတေးခဲ့မှုတွေက အချည်းနှီး မဖြစ်သွားပါဘူး" လို့ ပြောလို့ ရမယ့် အချိန်ဟာ မဝေးတော့ဘူးလို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
July 9, 2011 at 10:43 AM Reply
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု (၁) says:
July 9, 2011 at 10:47 AM Reply
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု (၁)
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု (၂) says:
July 9, 2011 at 10:48 AM Reply
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု (၂)
July 9, 2011 at 10:49 AM Reply
July 9, 2011 at 10:51 AM Reply
((( အရင် တုန်းကတော့ knu ကို dkba ကို တိုက်ခိုင်းတယ်။
အခု dkba ကို bgf နဲ့ တိုက်ခိုင်းမယ်။ ကရင် ကို ကရင် နှိပ်ကွပ်ခိုင်းယုံပဲ။ )))
စစ်ကျွန်တယောက် ရေးထားတဲ့ စကားပါ.. ဒီစကားဟာ စစ်အုပ်စုက တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးခွဲပြီး အချင်းချင်း ချခိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဗြောင် ဝန်ခံထားတာပါ..
စစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်ရေးကို ဦးတည်စေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို မလုပ်ဘဲ ပြည်တွင်းစစ်ကို မွေးထားပြီး အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ပြီး ချခိုင်းလာလို့ ပြည်သူတွေက ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ်တဲ့ကြားက မြေစာပင်တွေ ဖြစ်နေရတာပါ..
မငယ်နိုင်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေက တပ်နှစ်တပ်ကြားက မြေစာပင် တွေ ဖြစ်နေရတာပေါ့..
July 9, 2011 at 12:06 PM Reply
ကျနော် အရင် တင်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်မှာ မငယ်နိုင်
နာမည်ကို မှတ်ချက်ရဲ့ စာကိုယ်နေရာမှာ ရိုက်တာ မြားက နေရာရွေ့ပြီး Name နေရာမှာ ရောက်နေတာကို သတိမထားမိဘဲ မတော်တဆ နေရာမှားရိုက်မိသွားလို့ ဖျက်လိုက်တာ ခလုတ်မှားနှိပ်ပြီး မှတ်ချက်က မတော်တဆ တက်သွားတာပါ.. အဲဒီအတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား..
အဲဒီ မှတ်ချက်ကိုဘဲ ((မျိုးဆက်သစ်လူငယ်)) နာမည်နဲ့ အမှန် ပြန်ရိုက်ပြီး နောက်တခါ အသစ် ထပ်တင်လိုက်တာပါ..
ကျနော် တင်ထားတဲ့ မှတ်ချက်နှစ်ခုမှာ အရှေ့က မတော်တဆ တက်သွားတဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်လိုက်ပါ ခင်ဗျား..
သျှမ်းပြည်တွင် စစ်တပ်က လူထုပိုင်ဆိုင်မှု ကို လုယူခြင်း says:
July 9, 2011 at 12:22 PM Reply
သျှမ်းပြည်တွင် စစ်တပ်က လူထုပိုင်ဆိုင်မှု
ယခုလဆန်းအတွင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/ SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွါး နေသည့် အပြင် စစ်မြေပြင်နှင့်အနီးပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံလူထုအများအပြား မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများမြန်မာ စစ်တပ်၏ ယူငင်စား သောက်ခြင်းခံနေရကြောင်း မိုင်းရှူးရောက်ဒေသခံတဦးကပြောသည်။
ဘုရားကျောင်းမှာ မိုင်းထောင်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ယုတ်မာပုံ says:
July 9, 2011 at 1:02 PM Reply
ဘုရားကျောင်းမှာ မိုင်းထောင်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ယုတ်မာပုံ
မော်ချီးမြို့ တောင်ပေါ်ရွာရဲ့ စနေနေ့ ညနေခင်းလေးမှာ နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ဘာသာဝင် လူငယ်တစ်စုက ရှင်းလင်းရမယ့် မြက်ပင်တွေကို ပေါက်ပြားနဲ့ ပေါက်တဲ့သူကပေါက်၊ လက်နဲ့ နှုတ်တဲ့လူက နှုတ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြော၊ နောက်ပြောင်ကြရင်း ‘ဝုန်း’ ဆိုတဲ့ ပေါက်ကွဲသံ တစ်ခုက ရုတ်တရက် ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။
ပေါက်ကွဲသံနဲ့အတူ ၂၆ နှစ်အရွယ် စိုးမိုး ဆိုတဲ့ ဆူသူအရပ်သား လူငယ်ဟာ ညာခြေထောက် တစ်ဖက် ပြတ်သွားပါတယ်။
မတ်လ ၃ ရက်နေ့က မော်ချီးမှာ လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ ထင်းရူးတောင်စခန်း၊ တာဝတိသာစခန်း၊ ကျောက်တောင်စခန်း၊ ရှေ့တန်း (တပ်ရင်းရုံး)စခန်း၊ ၂ မိုင် (အမှတ် ၂) စခန်းနဲ့ ၉၄ မိုင် စခန်းအသီးသီးရဲ့ ကိုက် (၃ဝ) အကွာ ဝန်းကျင်အားလုံးကို မြေမြုပ်မိုင်းတွေ ချထားတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကိုကိုဦး ဦးစီးကွပ်ကဲတဲ့ ခလရ ၁၃၄ တပ်ရင်းက တရားဝင်အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မော်ချီးမြို့ တောင်ပေါ်ရွာရဲ့ စနေနေ့ ညနေခင်းလေးမှာ နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ဘာသာဝင် လူငယ်တစ်စုက မြက်ပင်တွေ ရှင်းကြရင်း ‘ဝုန်း’ ဆိုတဲ့ ပေါက်ကွဲသံနဲ့အတူ ၂၆ နှစ်အရွယ် စိုးမိုး ဆိုတဲ့ ဆူသူအရပ်သား လူငယ်ဟာ ညာခြေထောက် ပြတ်သွားပါတယ်။
July 9, 2011 at 10:33 PM Reply
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = တုတ်ကြီး = မောင် = zaw = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.) = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်)= SV ယောက်ျား = မှော်ဆရာ = ဦးသူတော်
July 10, 2011 at 12:00 AM Reply
(( ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = တုတ်ကြီး = မောင် = zaw = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.) = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်)= SV ယောက်ျား = မှော်ဆရာ = ဦးသူတော် ))
....... လို့ ရေးရင် မမှန်ဘူး..
ရုရှက mg ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်က (( ငယ်နိုင်.ယောကျာ်း ၊ တုတ်ကြီး ၊ မောင် ၊ zaw ၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး ၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.) ၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်) ၊ SV ယောကျာ်း ၊ မှော်ဆရာ ၊ ဦးသူတော် ))
............ ဆိုတဲ့ nicknames တွေ အပါအဝင် nicknames မျိုးစုံကို သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို နှောင့်ယှက်နေတယ် လို့ ရေးမှ မှန်တယ်..
July 10, 2011 at 12:06 AM Reply
....... လို့ ပြီးစလွယ် ရေးရင် မမှန်ဘူး..
............ ဆိုတဲ့ nicknames တွေ အပါအဝင် nicknames မျိုးစုံကို သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို နှောင့်ယှက်နေတယ် လို့
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးမှ မှန်တယ်..
July 10, 2011 at 12:48 AM Reply
9 Jul 11, 09:43 PM
သားထူး: မငယ်နိုင်ရေ.. တောတွင်တိုက်ပွဲတွေ အကြောင်းတွေကို ဖတ်ရတတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် .. အဲဒီ အချိန်ကာလတုန်းက ကျနော်က အထဲမှာလေ.. လေးစားပါတယ် မငယ်နိုင်
C-Box က ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်နေလို့ ကူးလာပါတယ်။
သားထူးရေ - ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တာကို နောက်တခါပို့စ်အောက်မှာပဲ ရေးစေချင်တယ်။
- စစ်ရန်နိုင်၊ အကြောင်းသိ၊ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်နဲ့ ဖိုးခွားတို့ကိုလည်း Attention လိုချင်လို့ အစ်မဘလေ့ာဂ်မှာ အမျိုးမျိုး လာနှောင့်ယှက်နေတဲ့ Attention seekers တွေကို သိပ်ပြီး အဖက်မလုပ်ဖို့၊ ခေါင်းထဲသိပ်မထည့်ဖို့ ပြောပါရစေ။
July 10, 2011 at 10:40 AM Reply
တုတ်ကြီး၊ မောင်၊ zaw ၊ စာင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး၊ မှော်ဆရာ နဲ. ဦးသူတော် ပဲ တွေ.ပါတယ်... အားလုံးက မငယ်နိုင်အကြိုက် လိုက်ပြောထားတာမဟုတ်လို. တစ်ယောက်တည်းလို. ပြောကြတာဖြစ်ပါလိမ်.မယ်။
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား ဆိုတာကိုတော. တစ်ခါတစ်လေ မငယ်နိုင်မဖြတ်ခင် တွေ.ဖူးပါတယ်...
ဒီစာရင်းထဲမှာမပါတဲ. အလင်း၊ ကျော်နိုင်၊ မေကိုလတ်၊ ယမင်းအိမ်ဇလီဦး၊ ဒီမိုကျော်ကျော်၊ မောင်မောင်ယဉ်ကျေး တို.လည်း မငယ်နိုင်ကို ဆန်.ကျင်ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်.. သူတို.ကရော ဘာလို. ငယ်နိုင်.ယောက်ျား တုတ်ကြီးတို.နဲ. အတူတူမဖြစ်ရတာလဲမသိဘူး
စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.) ၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ-မက်ဒရစ်မြို.၊စပိန်) ၊ SV ယောက်ျား ၊ ဆိုတာကိုတော. တစ်ခါမှမတွေ.ဖူးဘူး...
(ကျုပ်ကိုပါ ငယ်နိုင်ယောက်ျား တုတ်ကြီး တို.နဲ.အတူတူပဲဆိုပြီး ကွန်းမန်.ထပ်မရေးကြနဲ.အုံး)
July 10, 2011 at 1:58 PM Reply
ရုရှားက စစ်ဗိုလ် mg က han zaw နာမည်နဲ့ အစ်မကို လာပြီး အတည်ပေါက်နဲ့ အကြောင်ရိုက်နေတာကို မြင်ရတော့ ဟိုတလောတုန်းက ရုရှားက စစ်ဗိုလ် SLIP က "စစ်သည်" နာမည်နဲ့ အစ်မကို လာပြီး အရူးလုပ်တာကို သတိပြန်ရလာတယ်။
မိန်းမလိုမိန်းမရ လုပ်တတ်တဲ့ SLIP က "စစ်သည်" နာမည်ကို သုံးပြီး အစ်မကို ဗြောင်လာလိမ်တုန်းကလဲ အပေါ်ကဖုံး၊ အောက်ကပေါ် ဖြစ်ပြီး သူ့ဟာသူ အိုးမလုံ အုံပွင့် ဖြစ်ပြီး ဝန်ခံသွားတာ။ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် များတဲ့ "စစ်သည်" (SLIP) က အစ်မကို အပျော့ဆွဲ ဆွဲပြီး လိမ်ရင်း၊ လိမ်ရင်းနဲ့ မလုံမလဲ ပြောနေတဲ့ စကားတွေထဲမှာ သူ လိမ်နေပါတယ် ဆိုတာက ဗူးပေါ်သလို ပေါ်နေတော့ "အစ်မကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်တော့မယ်" ဆိုပြီး စကားတွေ လျှောချပြီး ထွက်ပြေးသွားတာကိုလဲ ပြန် မြင်ယောင်မိတယ်။ ကာယကံရှင် SLIP က အစ်မကို လိမ်လို့ မရတော့ အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်ပြီး သူ လိမ်တာကို အစ်မကို ဝန်ခံသွားပြီးတာကို SV က SLIP ဖက်က နာပြီး အစ်မကို လာချဲပြီး "ဒီဘလော့ကို ဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူး။ တခါထဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်" ဆိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ပြောသွားတာကိုလဲ သတိရတယ်။
အခုလဲ မိန်းမလိုမိန်းမရ လုပ်တတ်တဲ့ mg က han zaw နာမည်သုံးပြီး အစ်မကို ဗြောင်လာလိမ်နေတာကလဲ ရှေ့ကဖုံး၊ နောက်ကပေါ် ဖြစ်ပြီး စကား စကား ပြောပါများ၊ စကားထဲက ဇာတိပြ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတာပဲ။ ဟန်ဇော် ရေးပြထားတဲ့ နာမည်တွေ တသီတတန်းကြီးထဲမှာ မောင်မောင်ယဉ်ကျေး ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ နာမည်တွေ အားလုံးလိုလိုဟာ mg သို့မဟုတ် han zaw သုံးဖူးတဲ့ နာမည်တွေချည်းပါပဲ။
လူငယ်တစ်ဦးကို BGF က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် says:
July 10, 2011 at 2:55 PM Reply
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ကတိုင်တိကျေးနယ်အုပ်စုအတွင်းရှိ ဘောကျို့လယ်ကျေးရွာနေ လူငယ် စောတာပိုးလို (၁၈ နှစ်) ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် - BGF (၁၀၁၃) တပ်ရင်း လက်လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်စောမောင်စိုးမြင့် ဦးဆောင် BGF တပ်ဖွဲ့က ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီး၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ဦးနှောက် အားနည်းသူ (ကျပ်မပြည့်သူ) လူငယ် စောတာပိုးလိုကို ဘောကျို့လယ်ရွာ အပြင်တနေရာတွင် ဖမ်းဆီးကာ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး ထိုနေ့၌ပင် ရိုက်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
KNU ဖာပွန်ခရိုင်၊ တပ်မဟာ (၅) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူး စောကလယ်ဒို့က “BGF ဟာ တချိန်က DKBA ပေါ့နော်။ ဘာသာရေးနဲ့ ကရင်လူထုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်။ အခု BGF က လုံးဝ မြန်မာစစ်အစိုးရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လုပ်နေတာတော့ မကောင်းဘူး။ အားလုံးခြုံလိုက်ရင်တော့ တရားခံဟာ မြန်မာအစိုးရပဲပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် BGF အနေနဲ့ အမှားအမှန် ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာပြီး ပြည်သူတွေ ထိခိုက်စေတဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ အရာတွေ ထပ်မလုပ်ကြဖို့ BGF ကို တိုက်တွန်းချင်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ရတနာမြေမှ အမျိုးသမီးများ အစိုးရစစ်သားများ၏ မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ says:
July 10, 2011 at 3:14 PM Reply
ရတနာမြေမှ အမျိုးသမီးများ အစိုးရစစ်သားများ၏ မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ
Friday, 08 July 2011 18:48
တိုက်ပွဲကာလ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့က ပင်လုံအခြေစိုက် ခမရ ၅၁၃ နှင့် လဲချားအခြေစိုက် ခလရ ၆၄ ပူးပေါင်းသည့် တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ မိုင်းရှူးမြို့နယ် ကုန်းနင်ရွာသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဒေသခံများ၏ အိမ်ပေါ်တက် မွှေနှောက်ရှာဖွေ ယူငင်သည့်အပြင် ရွာသူအမျိုးသမီးများကိုပါ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့သည်ဟု မိုင်းရှူးရောက် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သူ ရွာသားတဦးကပြောသည်။
“ဗမာစစ်သားတွေဗျာ ရွာထဲရောက်တာနဲ့ အိမ်တွေပေါ်တက် အိမ်ရှင်ကိုရိုက်နှက် လိုတာ ရှာယူတော့တာ။ ယောက်ကျားတွေလဲ ပေါ်တာလိုက်ထမ်းရမှာစိုးလို့ ထွက်ပြေးကြတယ်။ ကျနော်တို့ရွာက မိန်းကလေး ၄ ယောက် မုဒိန်းကျင့်ခံရတယ် လေ။ နန်းဖုန်း (အသက် ၃၀ )၊ အေးလွတ် ( အသက် ၁၂ နှစ်)၊ ဒေါ်နန်းစံ (အသက် ၅၀- သားသမီး ၃ ယောက်ရှိ) ၊ နန်းမွန်း (အသက် ၁၂ နှစ်) ။ ဒီ ၄ ယောက်လဲ မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီး ရွာမှာ မနေရဲတော့ဘူး။ ထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ ကြားရတယ်။ တချို့လဲ အသတ်ခံရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ရွာမှာ အခု တယောက်မှ မနေရဲတော့ဘူး။ တချို့လဲ ဝမ့်ဆော့ဘက် ထွက်ပြေးတယ်။ တချို့လဲ နမ့်ပန်ချောင်း ဟိုးဖက်ကမ်းအထိ ထွက်ပြေးတယ်။ တချို့လဲ တောထဲမှာ စု ဖွဲ့ပြီးနေကြတယ်” ဟု အသက် ၅၀ ဝန်းကျင် အဆိုပါ အမျိုးသားက ပြောသည်။
အဆိုပါတပ်ဖွဲ့မှာ ကုန်းနင်ရွာအား ဝင်ရောက် မွှေနှောက်ပြီး ကုန်းနင်ရွာအနီး ဟွေ့မုန့် (လိဆော) ရွာသို့ ဆက်သွားကာ ရွာသား ၁၆ ယောက်အား ပေါ်တာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း၊ မိမိတို့ချောင်းပစ်ခံရပါက ၎င်းတို့ ၁၆ ဦးအား ပစ်သတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုထားသည်ဟု ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ရွာသားတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာတပ်အရာရှိအား လုပ်ကြံရခြင်း အကြောင်းရင်း သျှမ်းတပ်သား ထွက်ဆို says:
July 10, 2011 at 3:35 PM Reply
မြန်မာတပ်အရာရှိအား လုပ်ကြံရခြင်း အကြောင်းရင်း သျှမ်းတပ်သား ထွက်ဆို
အင်္ဂါနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 05 ရက် 2011 ခုနှစ်
ဂျွန်လ ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းက မိုင်းနောင်မြို့လယ်၌ သတင်း ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ယူနေသော သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တပ်သား စိုင်းအိုက်လှက မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိအား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရခြင်းမှာ ဒေသခံလူထုအပေါ် အဆိုပါ အရာရှိက အနိုင်ကျင့်လွန်းသောကြောင့် ဖြစ်၏။
“အဲဒီအရာရှိက ညနေညနေဆိုရင် မြို့ထဲလာပြီး အပျိုတွေကို ပိုးလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီညနေက မင်္ဂလာရန်အောင် မြို့လယ် ကျောင်းနားမှာ အရပ်ဝတ်၊ ပလိုင်းလွယ်တဲ့ ကျနော့်ကိုခေါ်ပြီး 'မင်း သျှမ်းသူပုန်လား၊ မှတ်ပုံတင် ပြပါဦး' ဆိုပြီးတောင်းကြည့်တာ။ အော်ငေါက် ဆဲဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ မေးတာ။ ဗမာစစ်သားကို နာကျည်းနေတာလဲ ရှိတော့ ကျနော်လဲ ချတော့တာပေါ့” ဟု ရုံးချုပ်ရောက် စိုင်းအိုက်လှက ပြောသည်။
ယခု ၎င်းသတ်လိုက်သော မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိမှာ ခလရ ၉ မိုင်းနောင်တပ်မှ ဖြစ်သည်။
“ သူ ကျနော့်မှတ်ပုံတင်ကြည့်နေတုန်း ကျနော်လဲ ပလိုင်းထဲက ဓါးဆွဲပြီး သူ့ကို ခုတ်တာ။ သူက ရှောင်တိမ်းရင်း ခါးက ပစ္စတို ဆွဲယူနေချိန်မှာ ကျနော်က သူ့ပစ္စတိုကို ကန်ထုတ်ပြီး ထပ်ခုတ်တာ သူ ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကျနော့မှတ်ပုံတင်ကို ပြန်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့သေနတ်ကို ကောက်ပြီး သူ့ကို ၂ ချက်ဆက်တိုက် ပြန်ပစ်ထဲ့လိုက်တယ်။ မလှမ်းမကမ်းက သူ့တပည့် ၂ ယောက်က ကျနော့်ကို သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်လောက် လှမ်းထုသေးတယ်။ မထိလို့ သေဘေးက လွတ်လာတာ” ဟု စိုင်းအိုက်လှက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ကို သတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း သျှမ်းတပ်သား ရှင်းပြ says:
July 10, 2011 at 3:49 PM Reply
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ကို သတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း သျှမ်းတပ်သား ရှင်းပြ
ဂျွန်လ ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းက မိုင်းနောင်မြို့လယ်၌ ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ယူနေသော သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တပ်သား စိုင်းအိုက်လှက ခလရ ၉ မိုင်းနောင်တပ်မှ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ကို သတ်ဖြတ်ရခြင်းမှာ ဒေသခံလူထုအပေါ် အနိုင်ကျင့်လွန်းသောကြောင့် ဖြစ်၏။
“အဲဒီ စစ်ဗိုလ်က ညနေဆိုရင် မြို့ထဲလာပြီး အပျိုတွေကို ပိုးလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီညနေက မင်္ဂလာရန်အောင် မြို့လယ် ကျောင်းနားမှာ အရပ်ဝတ်၊ ပလိုင်းလွယ်တဲ့ ကျနော့်ကိုခေါ်ပြီး 'မင်း သျှမ်းသူပုန်လား၊ မှတ်ပုံတင် ပြပါဦး' ဆိုပြီးတောင်းကြည့်တာ။ အော်ငေါက် ဆဲဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ မေးတာ။ ဗမာစစ်သားကို နာကျည်းနေတော့ ကျနော်လဲ ချတော့တာပေါ့” ဟု စိုင်းအိုက်လှက ပြောသည်။
“ သူ ကျနော့်မှတ်ပုံတင်ကြည့်နေတုန်း ကျနော်လဲ ပလိုင်းထဲက ဓါးဆွဲပြီး ခုတ်တာ။ သူက ရှောင်ရင်း ခါးက ပစ္စတို ဆွဲယူနေချိန်မှာ ကျနော်က သူ့ပစ္စတိုကို ကန်ထုတ်ပြီး ထပ်ခုတ်တာ သူ ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကျနော့မှတ်ပုံတင်ကို ပြန်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့သေနတ်ကို ကောက်ပြီး သူ့ကို ၂ ချက်ဆက်တိုက် ပြန်ပစ်ထဲ့လိုက်တယ်။ မလှမ်းမကမ်းက သူ့တပည့် ၂ ယောက်က ကျနော့်ကို သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်လောက် လှမ်းထုသေးတယ်။ မထိလို့ သေဘေးက လွတ်လာတာ” ဟု စိုင်းအိုက်လှက ရှင်းပြသည်။
စပီကာဦးမြင့် ဟောပြီးပြောပြီးမှ NLD ကို ချေမှုန်းမှာလား says:
July 10, 2011 at 4:54 PM Reply
စပီကာဦးမြင့် ဟောပြီးပြောပြီးမှ NLD ကို ချေမှုန်းမှာလား
ရန်ကုန်က NLD ရုံးချုပ်ကို ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့စစ်ပုလိပ်တွေ ရုတ်တရက် ၀င်ဝိုင်းပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၄၉)နှစ်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦကြီးကို တစ်စစီ ဖြိုခွဲသုတ်သင်ခဲ့သလို မြင်ချင်ကြတာလား။
တကယ်ဘဲ လုပ်လာနိုင်တဲ့ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာကြားရလို့ ကြိုတင် “ပစ်” ထားကြတာလား။
အစိုးရဘက်က မကြာခင်မှာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို ၀င်စီးတော့မှာမို့သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း တုန့်ပြန်မှုဘယ်လိုလာမလဲ သိရအောင် “ပွိုင့်” ထောက်လိုက်တာလား။
ဒေါ်စုရဲ့ အေးစက်စက် ပုဂံခရီးကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြသူတွေ လာမယ့် အာဇာနည်နေ့ အတွက် ရည်ရွယ်လို့ “ဖွ” လိုက်ကြတာလား။
သတင်းတွေမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။ သတင်းတွေဟာ ချစ်စရာပါ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သတင်းတွေ ဝေေ၀ဆာဆာရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သတင်းမရှိတဲ့ နာရီတွေဟာ သက်မဲ့ဝိညာဉ်ပါ။ အဓိကက သတင်းတွေကို ဖတ်ရှု နားထောင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့“အတွေ့အကြုံအနုအရင့် နဲ့ဝေဖန်စောကြောနိုင်စွမ်းအသိ”သည်သာ အခရာ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုနဲ့ အညှောင့်ပေါက်၊ အတက်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ တည့်တစ်ခါ လွဲတစ်လှည့်နဲ့။
NLD ရှိတာ ကြိုက်လား... မရှိတာ ကြိုက်လား...။ ဒီမေးခွန်းကို အစိုးရကို ၀ိုင်းမေးကြပါ။ ခဏခဏမေးကြပါ။ ကြုံတိုင်းမေးပါ။
လောလောဆယ်တော့ NLD ကို ၀င်ရောက်ဖြိုခွင်း စီးနင်းကြမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုသေးပါ။ သဘက်ခါ (၁၁ ရက်၊ ဇူလိုင်၊ နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ)မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးကြီး ဦးမြင့်တစ်ယောက် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအကြောင်းတွေ ဟောဖို့ပြောဖို့ ရှိသေးတယ်။ ဒီတစ်ချီတော့ ငါးလုပ်ငန်းမှာ မဟုတ်၊ UMFCCI မှာ မဟုတ်။ ရွှေဂုံတိုင်ရုံးချုပ်မှာတဲ့...။
စပီကာဦးမြင့် ဟောပြီးပြောပြီးမှ NLD ကို ချေမှုန်းမှာလား။
AB သွေးလှူဒါန်း ကူညီကြပါရန် says:
July 10, 2011 at 5:05 PM Reply
niknayman: မြိတ်မြို့ မှ မီးလောင်ခံရသူ လူနာတစ်ဦး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေရာ AB သွေး အမြန်လိုအပ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သွေးလှူဒါန်း ကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်မှာ - မနီနီလွင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၈၆၄၀၀၄၂ ဖြစ်ပါသည်။
NLD ရုံးချုပ် ဝင်စီးမှာလား စိုးရိမ်မှုဖြစ် says:
July 10, 2011 at 5:19 PM Reply
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် လူငယ်များက ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ ပါတီရုံးချုပ်တွင် ညအိပ်စောင့်ဆိုင်းနေသဖြင့် အတိုက်အခံပါတီကြီး၏ ရုံးခန်းကို အာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက် စီးနင်းမှာလား ဆိုသော စိုးရိမ်မှုများ ရန်ကုန်နှင့် နယ်စပ်ရှိ ဒီမိုကရေစီလိုလားသော အတိုက်အခံများအတွင်း
သို့သော် ပါတီရုံးကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖွယ် မရှိနိုင်ကြောင်း ပါတီအကြီးတန်း ခေါင်းဆောင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
NLD လူငယ် ၅ ဦးကျ ရုံးချုပ်တွင် ညအိပ် စောင့်ကြပ်နေသည်မှာ တပတ်ရှိပြီ ဖြစ်ကာ ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဂံသို့ ဘုရားဖူးထွက်သည့် အချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေနှင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ လိပ်မူပြီး တရားဝင်ပါတီမဟုတ်ဘဲ တရားဝင်သကဲ့သို့ လှုပ်ရှားနေခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေကြောင်း သတိပေးပြီးနောက် ဒေသခံရဲများက ရုံးချုပ်ကို ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်ပြီး စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ညအိပ်စောင့်ခြင်း
ဖြစ်ကြောင်း ပါတီလူငယ် ကိုရာဇာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မြန်မာအစိုးရက ကရင် အချင်းချင်း ပြန်တိုက်စေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချစ်သူကို ညှိခိုင်းတာပါ” says:
July 10, 2011 at 5:28 PM Reply
“မြန်မာအစိုးရက ကရင် အချင်းချင်း ပြန်တိုက်စေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချစ်သူကို ညှိခိုင်းတာပါ”
"(ကရင်)ရွာတွေကို အကုန် သတ်ခိုင်းတယ်ဗျာ။ လုပ်ချင်တာလုပ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်" လို့ ရှင်းပြပါတယ် says:
July 10, 2011 at 11:58 PM Reply
"(ကရင်)ရွာတွေကို အကုန် သတ်ခိုင်းတယ်ဗျာ။ လုပ်ချင်တာလုပ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးတဲ့
အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်" လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
(အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က စတင်ခဲ့တဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ မရပ်စဲသေးပါဘူး။
လက်ရှိ အခြေအနေတွေအပေါ် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ဟောင်း ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်နဲ့ ဦးရော်နီညိမ်း က မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” ကဏ္ဍကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။
"(နေပြည်တော်ကိုလည်း လုံခြုံအောင်)၊ ဒီ KNLA တပ်မဟာ (၂) နဲ့ (၃) ရဲ့ ဧရိယာကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီ KNU ရပ်တည် နေနိုင်တာဟာ၊ ဒီ (ကရင်)ရွာတွေရှိလို့ နေနိုင်တာဖြစ်တယ်၊ ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ အပြတ်ရှင်းခိုင်းတယ် ဆိုတာ၊
အကုန် သတ်ခိုင်းတယ်ဗျာ။ လုပ်ချင်တာလုပ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးတဲ့
အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ရှင်းပြပါတယ်။
July 11, 2011 at 12:58 AM Reply
SLIP က မငယ်နိုင်ကို အပျော.ဆွဲတာတော.မတွေ.မိဘူးဗျာ မငယ်နိုင်က အပျော.ဆွဲထားတာတွေကတော. တွေ.ဖူးတယ်
SLIP ရဲ.ဘလော.မှာလဲ မငယ်နိုင်ပေးထားတဲ.ကွန်းမန်.တွေက အများကြီး
အမြင်သာဆုံးကတော. http://myanmarastronomy.blogspot.com/ အဲဒီစီဘောက်စ်မှာ ရှိပါတယ်
July 11, 2011 at 1:15 PM Reply
"SLIP ရဲ.ဘလော.မှာလဲ မငယ်နိုင်ပေးထားတဲ.ကွန်းမန်.တွေက အများကြီး
အမြင်သာဆုံးကတော. http://myanmarastronomy.blogspot.com/ အဲဒီစီဘောက်စ်မှာ ရှိပါတယ်"
....... ဆိုပီး မင်းကအ၇ှက်မ၇ှိဘဲ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ပီးေ၇းသွားတယ်။
အဲဒီဘလော့တွေက Nge Naing အတုတွေက မင်းဘဲလေကွာ။
မင်းဘဲ အဲဒီဘလော့တွေမှာ Nge Naing နာမည်နဲ့ ပေါက်က၇တွေေ၇းနေတာဘဲ။
ဒါကို "မငယ်နိုင်ပေးထားတဲ.ကွန်းမန်.တွေ" ဆိုပီး အ၇ှက်မ၇ှိဘဲဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားလာေ၇းနေသေးတယ်။
ဒီကြားထဲက မင်းက မငယ်နိုင်ကို နေ့တိုင်းနီးပါး အေ၇မ၇အဖတ်မ၇တွေလာလာေ၇းနေတာ။
ဝေဖန်စ၇ာ၇ှိ၇င် ယောကျာ်းကောင်းတယောက်လို တည်တည်တန့်တန့်ဝေဖန်ပေါ့ကွ။
စစ်ဗိုလ်တယောက်လုပ်နေပီး မိန်းမလိုမိန်းမ၇ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလိုက်ေ၇းနေတာ မ၇ှက်ဘူးလားကွ။
မင်းလိုအလေနတောစကားတွေဘဲေ၇းနေတဲ့ကောင်နဲ့ အချိန်ကုန်ခံပီးမပြောချင်လို့ မပြောဘဲနေနေတာကွ။
မင်းလိုလူ့ကျင့်ဝတ်နားမလည်တဲ့ကောင်နဲ့ အဖက်လုပ်ပီးပြောမနေကြနဲ့လို့ မငယ်နိုင်ကပြောတာအမှန်ဘဲ။
July 11, 2011 at 9:35 PM Reply
ကွန်မန့်(၆၀) ဆိုလို့ ဝင်ကြည့်မိပါတယ်
ပို့ စ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာ နည်းနည်းပဲရှိတယ်
July 12, 2011 at 1:39 PM Reply
Anonymous (July 11, 2011 9:35 PM) ပြောတာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ် မငြင်းလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ Link တွေက အနှောင့်အယှက် လာပေးထားတဲ့ Link တွေမဟုတ်၊ အများပြည်သူဖတ်ဖို့ အကျိုးရှိတာတွေပဲ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ဖတ်သွားပြီး စိတ်မ၀င်စားသူတွေ မဖတ်ဘဲ ပြန်နိုင်ပါတယ်။ Anonymous ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်ရင် မသိသေးတာတွေ သိသွားနိုင်လို့ အကျိုးမယုတ်သွားမယ် မထင်ဘူး။
July 13, 2011 at 10:30 PM Reply
ညက ဒေါ်လာစားရေးထားတဲ. ကွန်းမန်.တစ်ခုတွေ.လိုက်ပါတယ်.. ဘာလို.ဖြတ်လိုက်တာလဲမငယ်နိုင် ဆဲထားတာမပါပါဘူး
အရင်တုန်းက မငယ်နိုင်ရေးခဲ.ဖူးတဲ. ကွန်းမန်.ကို မေ.သွားလို့လား
Nge Naing said.. ဒေါ်လာစားရေ ငါ့အကြော်းရေးမယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတာ
ရေးခိုင်းပြီး လူမြင်မခံနိုင်လို.ဖြတ်ရင်တော. မထူးဘူးလေ
July 13, 2011 at 11:23 PM Reply
ဒေါ်လာစား - မင်းရေးသွားတာ ညကမဟုတ်ဘူးလေ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနာရီက ဒီမနက်ကမှ လာရေးသွားတာ။ မင်းလာရေးတဲ့အချိန်မှာ ငါရှိနေတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက်ကို မင်းထည့်လိုက်လို့ ပေါ်လာတာနဲ့ ငါချက်ချင်း ဖျက်လိုက်တာ ဘယ်သူမှတွေ့ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူး။ ပြဿနာလာရှာတာကို ခေါင်းထည့်မထည့်ချင်လို့ ငါဖျက်လိုက်တာ။ အဲဒီမှတ်ချက်ကို တွေ့တဲ့သူက လာထည့်တဲ့သူတယောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Anonymous တွေဘာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့ ဒေါ်လာစားက ဒေါ်လာစားပေါ့။ ယောက်ျားလုပ်ပြီး ဘာလို့ ၀န်ခံရမှာ ကြောက်နေရတာလဲ။ မင်းကိုငါပြောထားတာ ဒီလို ငါ့ဘလော့ဂ်နဲ့ ဘလော့ဂ်တကာမှာ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါက်ကရလာရေးတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ပို့စ်နဲ့ C-Box မှာ အမှိုက်လာပွတာကို ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ငါ့နာမည်၊ ငါ့မိသားစုနာမည်နဲ့ မင်းဘလော့ဂ်မှာ ပေါက်ကရရေးဖို့ ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ မင်း ငါ့ C-Box မှာ လာပြောခဲ့တဲ့ ငါယောက်ျားမရခင်က ယောက်ျားတကာနဲ့ မဲဆောက်မှာ ရှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ မင်းဘလော့၈်မှာ အဲဒါကို ရေးပါ။ ငါစောင့်ဖတ်နေပါတယ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ ငါကမင်းသမီးလည်း မဟုတ်၊ ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘူး ငါ့ဓါတ်ပုံတွေ စုပြီးမင်းဘလော့ဂ်မှာ တင်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဒီပို့စ်မှာ မှတ်ချက်လာရေးတယ်ဆိုတော့ ငါတို့ အမျိုးသမီးရဲမေတွေပါတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ၀င်တိုက်လို့ မင်းတို့ရဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးရတဲ့ အကြောင်းလေးတော့ ဖတ်ပြီးလောက်ပြီပေါ့။ ငါက ငါ့ပို့စ်ကို မဖတ်ဘဲနဲ့ မှတ်ချက်ပေးတာကိုလည်း လက်မခံတတ်ဘူး။ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်သွားလိုက်ပါ။
(အဲဒါ သိအောင်ေ၇းပြတာ အပေါ်က မင်းမှတ်ချက်နဲ့ ဒီမှတ်ချက်ကို ၂၄ နာရီကြာရင် ဖျက်ဖို့ရှိတယ်)
ဒီဘလော့ဂ်မှာပေါက်ကရ လာရေးနေတာ၊ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အတုလုပ်ခဲ့တာ၊ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အခမဲ့ယုတ်ရိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ အခမဲ့ ကြော်ငြာပေးနေတာနဲ့ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း လာရေးနေသူတွေဟာ ဒေါ်လာစားတို့ အုပ်စုတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ အားလုံးက Attention seekers တွေ ဖြစ်သလို Attention ပေးလိုက်ရင် ခွေးကို အရောဝင်တာထက် ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အပေါ်က ဒေါ်လာစား Anonymous နဲ့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို နောက်ပိုင်း ဖျက်မှာမို့ ဘယ်သူမှ အကြောင်းမပြန်ဖို့ တခြားစာလာဖတ်သူတွကို တ္တောရပ်ခံပါတယ်။
ဆဲဗင်းဇူလိုင် သမိုင်းမှန်ကို မငယ်နိုင်က ဖော်ထုတ်နေတာပါ says:
14 Jul 11, 03:20
သမိုင်းမှန် ဖော်ထုတ်နေတာ: မငယ်နိုင်ကို ပက်ပက်စက်စက် ဆဲနေတဲ့ စစ်ခွေးသို့  ... ဟိတ်ကောင် .. စစ်ခွေး၊ ပြည်သူ့ ဘက်တော်သား မငယ်နိုင်က ၇-၇-၁၉၆၂ ရက်မှာ လက်နက်မဲ့ ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော်ကို မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့  အသေ ပစ်သတ်တဲ့ စစ်ခွေးတွေရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်မှုအကြောင်းကို ရေးတာပေါ့ကွာ.. စစ်ခွေးတွေက ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လူကိုခွေးသတ်တဲ့ ဆဲဗင်းဇူလိုင် သမိုင်းမှန်ကို မငယ်နိုင်က ဖော်ထုတ်နေတာပေါ့ကွာ.. မင်း ဆဲလို့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးကွ..
July 14, 2011 at 7:15 AM Reply
14 Jul 11, 03:31
သမိုင်းမှန် ဖော်ထုတ်နေတာ: ဟိတ်ကောင် .. စစ်ခွေး၊ ပြည်သူကို သတ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေဟာ စစ်ခွေးတွေပေါ့ကွ.. ပြည်သူကို ဆဲတဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေဟာ စစ်ခွေးတွေပေါ့ကွ.. စစ်ခွေးတွေကို စစ်ခွေးတွေလို့ ပြောတာဟာ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပြောတာပေါ့ကွ.. အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပြောလို့ အနာပေါ်တုတ်ကျ အခံရခက်ပြီး လာဆဲနေတာလား၊ စစ်ခွေးရ..
July 14, 2011 at 10:02 AM Reply
((ဒီမှတ်ချက်ကို ၂၄ နာရီကြာရင် ဖျက်ဖို့ရှိတယ်)) လို့ မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက် (July 13, 2011 11:23 PM) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးပါရစေ။
((Anonymous)) ရဲ့ မှတ်ချက် (July 13, 2011 10:30 PM) ကို ဖျက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မငယ်နိုင်က Anonymous ကို ပြန်ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက် (July 13, 2011 11:23 PM) ကိုတော့ မဖျက်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေက မငယ်နိုင်ရဲ့ ဘလော့ကို အတု လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်က စပြီး မငယ်နိုင်ဘလော့ကို စာဖတ်သူ အသစ်တွေ ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးပွားလာတာ အခုအထိပါ။ အဲဒီ စာဖတ်သူ လူသစ်တွေက မငယ်နိုင်ဘလော့မှာ မငယ်နိုင်နဲ့ ပြည်သူတွေကို ရုရှားက စစ်ခွေးပေါင်းစုံက အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ နှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ နည်းလမ်းအဖုံဖုံကို သေသေချာချာ မသိသေးလို့ Anonymous ကို ပြန်ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို မဖျက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါ။
မငယ်နိုင်က ((7 July, 1962 မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ)) ပို့စ် တင်ပြီးကတဲက အမှန်တရားကို ပြည်သူတွေ သိမှာ အသေကြောက်တဲ့ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေက ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေက စီဘောက်တွေမှာ မငယ်နိုင်ကို ပက်ပက်စက်စက် မိုးမွှန်အောင် ဆဲတာ၊ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပုတ်ခတ်စော်ကားတာတွေအပြင် ကျေးစေတမန်၊ ပိတောက်မြေ၊ Myanmar Astronomy (ရုရှားက SLIP ပါဝင် ရေးသားနေတဲ့ ဘလော့) ဆိုတဲ့ သူတို့ဘလော့တွေမှာ မငယ်နိုင် နာမည်ကို သုံးပြီး ပေါက်ကရတွေ ရေးနေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ မငယ်နိုင်ကို ပက်ပက်စက်စက် မိုးမွှန်အောင် ဆဲထားတာတွေကိုတော့ ဒီမိုကရေစီဘလော့ရှင်တွေက ဖျက်လိုက်လို့ အခု မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေက မငယ်နိုင် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်အောင် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ လိမ်လည်ဖန်တီးပြီး ရေးထားတာတွေက ဒီမိုကရေစီဘလော့ရှင်တွေက မဖျက်ခင် စပ်ကြားမှာ ဘလော့လာသူတွေက မြင်နေရပါတယ်။ အဲဒီ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ မငယ်နိုင်ဘလော့ကို လာနေကျ လူဟောင်းတွေကတော့ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေရဲ့ ညစ်ကွက်တွေကို သိထားကြလို့ သူတို့ ရေးထားတာတွေက ကလိမ်ကကျစ် လံကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေ ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မငယ်နိုင်ဘလော့ကို အခုတလောမှာမှ စပြီး ရောက်လာတဲ့ စာဖတ်သူ အသစ်တွေက ရုရှားက စစ်ခွေးတွေရဲ့ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာပုံတွေကို မသိကြသေးတော့ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေရဲ့ ယုတ်မာ အောက်တန်းကျတဲ့ တိုက်ကွက်တွေကြောင့် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ ပြည်သူတွေ အမှန်ကိုသိဖို့ လိုပါတယ်။
မငယ်နိုင် အပါအဝင် ပြည်သူ့ဘလော့ဂါတွေက သမိုင်းမှန်ကို ဖော်ထုတ်နေတာပါ။ သမိုင်းမှန်ကို ဖော်ထုတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေက အောက်တန်းကျကျ ဆဲလိုက်၊ ယုတ်ယုတ်မာမာ ပုတ်ခတ်စော်ကားလိုက်၊ ဘလော့အတု လုပ်ပြီး ညစ်ညမ်းစာတွေတင်ပြီး နာမည်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်၊ နာမည်အတုနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် ရေးလိုက်၊ မမှန်သတင်းတွေ လွှင့်ပြီး သိက္ခာချဖို့ ကြိုးစားလိုက် လုပ်နေတာတွေဟာလဲ သမိုင်းမှန်ပါ။ ဒီသမိုင်းမှန်တွေကိုလဲ မသိသေးတဲ့ ပြည်သူတွေ သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မငယ်နိုင်က ဒေါ်လာစားကို ပြန်ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို မဖျက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါ။
14 Jul 11, 03:21 AM
aa: မငယ်နိုင်ရဲ့ တိုက်ပွဲအကြောင်း လေးတွေ ဖတ်ရတာ မဆိုးပါဘူး၊ တကယ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား၊ မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်သမီးတွေက ရှေ့တန်းမလိုက်ပါဘူး လူမှုရေး ရှုပ်နိုင်တယ်လေ။ မငယ်နိုင်တို့ကော
14 Jul 11, 10:52 AM
Nge Naing: ကျွန်မတို့လည်း ရှေ့တန်းဆင်းခွင့်ရဖို့အတွက် အကြိတ်အနယ် တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှ ဒီအခွင့်အရေးကို ရခဲ့ပါတယ်။ တပ်မှာ စည်းကမ်းရှိတယ် လူမှာ လူ့ကျင့်ဝတ်ရှိတဲ့အတွက် ဘာလူမှုရေးမှ ရှုပ်ထွေးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
14 Jul 11, 10:54 AM
Nge Naing: တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီတိုက်ပွဲမှာ ပါတဲ့အထဲက အခုထိ အသက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတဲ့သူုတွေ ရှိပါသေးတယ်။ မဟုတ်က ဟုတ်ကရေးရင် ဘယ်သူမှ ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။
July 14, 2011 at 1:08 PM Reply
သမိုင်းလေ့လာသူရဲ့ အကြံပြုချက်ကြောင့် ကျွန်မတုန့်ပြန်တာအပါအ၀င် ဖျက်လိုက်တဲ့ ဒေါ်လာစား မှတ်ချက် တခု မကဘူး အကုန်ပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်။
Anonymous has leftanew comment on your post "တခုသော ၁၉ ဂျူလိုင် မှာ ကျွန်မ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ပ...":
http://myanmarastronomy.blogspot.com/ အဲဒီဘလော.က စီဘောက်စ်မှာ
Posted by Anonymous to Nge Naing at July 13, 2011 9:39 AM
ဒေါ်လာစား to me
show details 5:31 PM (19 hours ago)
ဒေါ်လာစား has leftanew comment on your post "တခုသော ၁၉ ဂျူလိုင် မှာ ကျွန်မ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ပ...":
ကျွန်တော့ဘလော့ကိုလည်း မိသားစုလိုက်အမြဲလာလို့ ကျေးဇူးဗျို့
SLIP ကို မငယ်နိုင်စွဲလမ်းနေတာကျွန်တော်အသိဆုံးနော်
http://myanmarastronomy.blogspot.com/ ရဲ့ စီဘောက်စ်မှာ မငယ်နိုင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားရေးတာတော့ လွန်တယ်
ကျွန်တော်ရေးသမျှ ကွန်းမန့်တွေဖျက်ပြီး ရေးချင်ရေးဂရုမစိုက်ဘူး လို့ အရင်လိုပဲ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးထပ်အ်ာမနေနဲ့အုံး.. စာဖတ်သူတွေက သိတယ်.. ကိုယ့်ဖက်ကမှန်တယ်ဆိုရင် ဘာမှဖျက်စရာမလိုဘူး၊ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခံနိုင်ရတယ်။ အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲ။
Posted by ဒေါ်လာစား to Nge Naing at July 13, 2011 5:31 PM
ေ-ာက်ရူးေ-ာက်ပေါ -င်ခံ မကြီး.. ဖာသည်မကြီး .. ကြက်မကြီး .. ငါပေးတဲ့ကွန်မန့် ဘယ်သူ့ မှမမြင်လဲ နင်မြင်မှာပါ))))) ကိုယ်တိုင် ဖာခံ -င်ခံရုံမကဘူး တိုင်းပြည်ကိုပါ ဖာဇတ်သွင်းနေတာ .. နင်သေရင် နင့် (---) တာင် လှမှာမဟုတ်ဘူး..
July 14, 2011 at 2:13 PM Reply
၇ု၇ှက စစ်ဗိုလ်တွေက မိုက်၇ိုင်းလိုက်တာ
ဒီလို ကလေကချေကောင်တွေကို ပညာတော်သင် လွှတ်ထားတော့ တိုင်းပြည် နာတာပေါ့
July 14, 2011 at 8:24 PM Reply
သမိုင်းလေ့လာသူ ပြောသလိုပဲ ဘလော့ဂ်အတု လုပ်ခံရတဲ့ မတ်လကစပြီး ဘလော့ဂ်က လူအလာများလာတာကတော့ အမှန်ပဲ။ ဒေါ်လာစားက မာသမာနည်းနဲ့ လုပ်သမျှတွေက ကျွန်မကို ဘလော့ဂ်ကြော်ငြာပေးရာ ရောက်သလို မိတ်ဆွေတွေကလည်း C-Box မှာ လိုက်ကြော်ငြာပေးကြတာ ရှိတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်က ဒီသုံးလေးလအတွင်းမှာ အရင်နှစ်နှစ်နီးပါး ကာလကထက် အဆပေါင်း များစွာလာလည်သူ ဦးရေ တိုးလာတာ အမှန်ပဲ။ ဒေါ်လာစားကလည်း သူက လူမလာအောင် လုပ်လိုက်မှ လူပိုလာနေတာကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်နေတာလည်း အမှန်ပဲ။
နောက်ပိုင်းကျတော့ ပြည့်တန်ဆာရုံ လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ မအောင်မြင်တော့ လမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လူလာများတာကို တွေ့ပြီး သူတို့ဘလော့ဂ်ကို လူမလာကြတော့ Nge Naing ဓါတ်ပုံတွေ ရသမျှ စုဆောင်း သူ့ဘလာ့ဂ်မှာတင်ပြီး ငယ်နိုင်အကြောင်း၊ တခြားသူတွေအကြောင်း မဟုတ်မဟတ်တွေ ပို့စ်တွေမှာရေးတယ်၊ Nge Naing နာမည်သာမက မိသားစု နာမည်တွေနဲ့ Comment တွေ C-Box တွေမှာ သူ့ဘလော့ဂ်ကို လူလာလိုလာငြား အတုတွေ ရေးရတာ မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲ။ ဘယ်လောက် ယုတ္တိရှိလဲဆိုတော့ မြန်မာစာကို သူငယ်တန်းစာအုပ်တောင် ပြီးအောင် မသင်ပေးရသေးတဲ့ ကျွန်မသားကို ဒေါ်လာစားက ဘယ်တုန်းက မြန်မာစာ ကျွမ်းကျင်အောင် ဘယ်လို သင်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး တိုးနန္ဒနာမည်နဲ့ မြန်မာစာတွေ ရေးထားလိုက်တာ နိုင်ငံခြားက ၇ တန်းကျောင်းသား မပြောနဲ့ မြန်မာပြည်က ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားတောင် မြန်မာစာကို အဲလို ရေးတတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး မထင်ဘူး။ တိုးနန္ဒအမည်နဲ့ သူလုပ်ကြံ ရေးထားတာ တကယ့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မြန်မာစာ အဆင့်ရှိတယ်။
အိမ်က ယောက်ျားကလည်း ဒေါ်လာစားဘလော့၈်မှာ ဆောင်းပါးရှင်တွေဘာတွေတောင် ဖြစ်လို့၊ Comment တွေ၊ C-Box တွေမှာလည်း အချိန်ပြည့်ပဲ။
ဒေါ်လာစားက ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မမိသားစုအတွက် အချိ်န်တွေပေးတာ တော်တော်များနေလို့ ဂရုဏာပဲ သက်ရမလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်မကဘလော့ဂ်တွေမှာ ဘယ်ဘလော့ဂ်မှာပဲ မှတ်ချက်ရေးရေး ကျွန်မ google mail လိပ်စာနဲ့ပဲ ရေးလေ့ရှိတော့ ကျွန်မရေးတိုင်း ကျွန်မရဲ့ Profile ဓါတ်ပုံပေါ်နေပြီး နှိပ်လိုက်ရင်လည်း blogger profile ကို တန်းရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူ့လော့ဂ်မှာ ကျွန်မနာမည်တွေ အားလုံးက လျှာအခွပေါင်း တရာလောက်နဲ့ ဒေါ်လာစားက သူကိုယ်တိုင် ရေးထားတာတွေသာ ဖြစ်တယ်။
လူတကာကို မဟုတ်မဟတ် ပုတ်ခတ်စော်ကားခွင့် အယုတ္တဆဲခွင့်တို့ကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေပါလို့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကြတာ ဒီလို မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ လျှောက်လုပ်မှ ဒေါ်လာတွေ ရပြီး ထမင်းစားရတယ်ဆိုတော့လည်း တကယ်ကို သနားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ဒေါ်လာစားက ကျွန်မကို မိုးသွေးငယ်နဲ့ ဖေါက်ပြန်နေတယ်လို့ 1010 မတ်လက http://nge-naing.blogspot.com/2010/03/c-box.html အဲဒီပို့စ်ကို မတင်ခင်ကစပြီး စွပ်စွဲလာတာ အခုတော့ အပေါ်မှာရေးထားတာ Slip နဲ့ ဖြစ်သွားပြန်ပြီတဲ့။ အရင်ကလည်း Facebook က ကိုအလင်းအိမ်ရဲ့ ပို့စ်တခုမှာ Slip နဲ့ Nge Naing က ရည်းစားဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောဖူးပြီး အခုလည်း ထပ်ပြောလာတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မပြန်ပြောခဲ့တာကို မေ့သွားပြီထင်လို့ အခုပြန်ပြောမှဖြစ်မယ်။
" မင်း ပြောတဲ့စကားက အရှေ့အနောက် လွတ်ရဲ့လား။ ငါ့မှာ အိမ်ထောင်နဲ့ သားနဲ့ မိသားစုဘ၀ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာမှ ဖုံးထားတာ မရှိဘူး။ ဘလော့ဂ်ရော Fb က Profile မှာပါ ပြထားပါတယ်။ ငါ့ကို အသက်လေးဆယ်ပြည့်ရင်ပဲ လူစဉ်မမီတော့သလိုလိုနဲ့ အသက်လေးဆယ်အရွယ် မိန်းမကြီးလို့ အသက်ကို နှိမ်စရာမဟုတ် နှိမ်ပြီးလည်း နင်တို့ဆရာရော နင်တို့ပါ ပြောကြတယ်။ အခု မင်းပြောစကားအရ အဲဒီအသက်လေးဆယ်အရွယ် ယေက်ျားရှိတဲ့ ကလေးတယောက်အမေ မိန်းမကြီးနဲ့ မင်းဆရာနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရင် ဘယ်သူ့မှာ သွားထိခိုက်လဲ မင်းမစဉ်းစားမိဘူးလား။ ပေးသူပေးတာကို အပေးခံရသူက လက်မခံရင် ပေးသူဆီ ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း မင်းပြောတာ ငါ့ကိုဘာမှ မထိခိုက်တာတော့ သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းပြောလိုက်တဲ့ စကားအရ မင်းဆရာက ကြာကူလီ ဖြစ်မသွားဘူးလား။ မင်းသူများကို ကြာကူလီလို့ ပြန်စွတ်စွဲနေတာလား။ မင်းစကားက ခုတ်ရာခြား ရှရာတခြား မဖြစ်စေနဲ့။ နောက်တခါ စကားပြောရင် ဆင်ခြင်လို့ ရအောင် ပြောပြတာ" လို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း လူတကာ သိထားတာ သူ့ဆရာက လူလွတ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ပဲ ထည်လဲတွဲ ရှုပ်တယ်လို့ သိထားတာ အခုတော့ အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့လည်း ကြာကူလီရိုက်ရှုပ်ခဲ့တယ်လို့ သူက ကြေညာပေးနေသလို ဖြစ်နေတယ်။
သူများကို မကောင်းကြံချင်တာ ပြောချင်တာ အပုတ်ချချင်တာပဲ သိပြီး သူများကို နစ်နာစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောလိုက်လုပ်လိုက်တာတွေအားလုံးက သူများဆီမရောက်ဘဲ သူ့ဆီပြန်ရောက်နေတာကိုတော့ ဒေါ်လာစားအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အင်းးး.... ဒီစစ်ခွေး တအုပ်လဲ မငယ်နိုင်နဲ့ တွေ့မှ ယုတ်မာတဲ့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဘီလူးခေါင်းရုပ်တွေ ပီပီ ပြင်ပြင်ပေါ်လာတော့ တာဘဲ.. မင်းတို့ ဘ၀ကလည်း တော်တော် သနားစရာကောင်းတာဘဲ၊ တကယ် ပညာမတတ်တဲ့ ပညာတတ် အမည်ခံလေးတွေရေ..
July 18, 2011 at 12:39 PM Reply
"သန်းရွှေ မခိုးဘူး လို့ ပြောရဲလား" ၊ "ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်တွေ မပါဘူး လို့ ပြောရဲလား" ဆိုပြီး ဆရာ ဒေါက်တာ ဦးလှိုင်မြင့်က စစ်ဗိုလ်အားလုံးကို ဆိုင်ယာနိုက် အဆိပ် သောက်ကြေး စိမ်ခေါ်ထားတာကို ဘယ်စစ်ဗိုလ်မှ ယောကျာ်းလို မထွက်ရဲကြတော့ မိန်းမဥာဏ်နဲ့ ဆရာ ဒေါက်တာ ဦးလှိုင်မြင့်ကို နာမည်ဖျက်ဖို့ ကလိမ်ကကျစ်ကွက်တွေ စလာပါပြီ.. အခုရက်ပိုင်းမှာ ရုရှားက စစ်ဗိုလ် mg က "ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်" နာမည်နဲ့ အစ်မ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို စ ရေးနေပါပြီ..
July 18, 2011 at 1:29 PM Reply
September 2, 2015 at 6:59 AM Reply
November 28, 2015 at 1:32 AM Reply